အူရိုငျးလေး – My Blog
တဈခါတုနျးက တက်ကသိုလျမှာ… အမှတျတရရှိတဲ့အကွောငျးလေးတခုပေါ့ဗြာ။… အဲ့နကေ့မှတျမှတျရရ၁၂ရကျနေ့၅လပိုငျးလောကျကပေါ့။ အဝေးသငျ မဂြောတှစေဖှငျ့တဲ့အခြိနျပေါ့။အဝေးသငျ မဂြောဆိုလို့ ပွောရအုံးမယျ။ကြှနျတျောတို့ သိပ်ပံမဂြောသမားတှကေ၁ပတျခွား ၊အပတျစဉျ စနေ၊တနင်ျဂနှပေဲ တကျရတာလေ။ဒါပမေဲ့ အဲ့လို တပတျကို ၂ရကျပဲ တကျရတာလေးတောငျ ကြှနျတျော စိတျမပါဘူးလေ။ကြှနျတျောတို့ လူငယျတှဆေိုတာကကောငျးတာထကျ မကောငျးတာဆိုရငျ ပိုပွီး ဝါသနာပါကွတာကိုးဗြ။(မှတျခကျြ ။။ဆရာကွီးဒီဇိုငျးဖမျးပွီးပွောခွငျး။ ဟိဟိ ) အဲ့လိုနဲ့ကြောငျးကို ရောကျလာတယျပဲဆိုပါတော့။… အဲ့မှာစတှတေ့ာဗဇြာတျလမျးကအခုမှ စလာတာ။ကြောငျးထဲ ဝငျလိုကျတာနဲ့ကို ပနျးပေါငျးစုံ ခငျးကငျြးထားတဲ့ ပွပှဲလားအောကျမေ့ ရလောကျအောငျ ဒီဇိုငျးအစုံအလငျနဲ့ ကြောငျးသူမမမြားကို တှရေ့တော့တာပဲ။
အဲ့ထဲမှာအထူးခွားဆုံးတယောကျကတော့ဗြာ ကဗြာဆနျဆနျ ပွောရရငျတော့ ကြှနျတေျာ့စိတျကို ညှိ့ယူသှားတဲ့ မကျြဝနျးပိုငျရှငျလေးပေါ့ ။သူပုံစံက ဖတျနကွေ အပွာစာအုပျတှထေဲကလို တောငျ့တောငျ့ ထှားထှားလညျးမဟုတျဘူးပွီးတော့ ပိနျပိနျ ရှညျရှညျကွီးလညျးမဟုတျဘူးလေ။အနတေျောလေးပဲ။ ကြှနျတျောအနနေဲ့တော့ အံကိုကျပဲပေါ့။ကြှနျတျောက အစစအရာရာမှာဇီဇာကွောငျတတျတဲ့ လူလေ။အဲ့လို ဇီဇာကွောငျလှနျးလို့ အခုခြိနျထိ ရညျးစားဆိုပွီးလကျဆုပျ လကျကိုငျပွစရာကို မရှိဘူး။သူနဲ့တှမှေ့ ကိုရိနျမိုးသီခငျြးလို ဖွဈသှားတော့တယျ။… “မငျးနဲ့တှမှေ့ မခိုငျတဲ့ နှလုံးသား ၊ တုနျရီနပွေီ ခဈြလေးရေ”…အဲ့လိုလေးပေါ့။ လရှေညျနတေယျ မထငျကွပါနဲ့ဗြာ။ဖီးလေးတကျနလေို့ပါချချ ။… မွငျမွငျခငျြးပဲ ခဈြမိသှားတာဆိုတော့ သူ့အကွောငျးစုံစမျးရတော့ တာပေါ့ဗြာ။။သူ့နာမညျလေးကခိုငျခငျနှငျးတဲ့ သူတကျတဲ့ မဂြောက သခြာင်ျကလေ။အဲ့လိုစုံစမျးပေးတဲ့ ဘျောဒါကိုလညျးကြေးဇူး ပွုရသေးတာပေါ့ဗြာ။စုံစမျးတဲ့ အကွောငျးတော့ အကယျြတဝငျ့ မရေးတော့ပါဘူး။လရှေညျနတေယျ ထငျမှာဆိုးလို့ ဟိဟိ။ သူ့နောကျကိုလိုကျ သူမသိအောငျ ငေးကွညျ့ “လြှောကျပွနျသံပေး ခွအေေးဝမျးယောငျ “တလလောကျ လုပျပွီးတော့ ရလာတဲ့ အကြိုးဆကျကသူ ကြှနျတေျာ့ကို သတိထားမိ လာတယျပေါ့ ဗြာ။
အဲ့လိုနဲ့ တနကေ့တြော့ ကြှနျတျောပဲကံကောငျးခငျြတာလား..သူပဲ ကံဆိုးခငျြတာလားတော့ မသိဘူး။သူစီးလာတဲ့ ဖိနပျလေးက ရုတျတရကျ ပွတျသှားပါလရေော။သူလညျးစိတျတျောတျော ပကျြနပေုံရတယျ ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့နဲ့။ကြှနျတျောလညျး မယောငျမလညျနဲ့အနားကို ကပျပွီးရညျးစကားမပွောပါဘူး။ ” ဘာမြားကူညီပေးရမလဲအမပေါ့ “သူကြှနျတေျာ့ကို မော့ကွညျ့ပွီး” ဒီမှာလနှေငျးဖိနပျလေးပွတျသှားလို့ အဲ့ ဒါဘာလုပျရမှနျးမသိ ဖွဈနတော”လို့ ပွနျပွောတယျ။သူ အဲ့လို ခြိုခြိုသာသာပွနျပွောမယျလို့ ကြှနျတျော မထငျထားမိဘူး။ အဲ့ ဒီတုနျးကကွားလိုကျရတဲ့ အသံလေးကအရမျးကို ခြိုမွိနျလှနျးလို့ ဆားငံ ရေ၁၀ခှကျလောကျ သောကျလညျးခြိုနတေယျပဲ ထငျမိမှာ။…ဆောရီးအခုမှ အခဈြကိုတှသှေ့ားလို့ …ကဗြာဆနျနေ မိတယျ။အဲဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျး”ကြှနျတျော ကူညီပါရစေ”ဆိုပွီး ဟိုလူကွီးတှရေဲ့ဆောငျပုဒျကို ခဏယူသုံးလိုကျတယျ။ကူညီတယျ ဆိုပမေဲ့ လညျးပွတျနတေဲ့ ဖိနပျလေးကို အပျနဲ့ တှဲပေးလိုကျတာပါ။ ဒီနရောအပျ ဘယျကရသလဲဆိုပွီးမေးတဲ့လူတှအေတှကျ အဖွကေတော့ အပျကသူ့ဆီကပဲငှားတာပါ။စကားပုံအရဆိုရငျ ငါးကွငျးဆီနဲ့ငါးကွငျးပွနျ ကွျောတယျပေါ့ဗြာ။
အဲ့ ဒီလို ကူညီပေးရာက စပွီးသူနဲ့ခငျမငျမှု ရခဲ့တယျ ဆိုပါတော့ဗြာ။ သူနဲ့ခငျတာကွာလသေူ့ကိုခဈြတဲ့ စိတျကမြားလာလလေေ ဖွဈနေတော့ သူရိပျမိသှားမလားလညျး ကွောကျရသေးတယျဗြ။ ရလပိုငျး၆ရကျနလေ့ောကျပေါ့ … အဲ့နကေ့တမနကျလုံးပရကျတီကယျတှလေကျခြာခြိနျတှနေဲ့ ရှုပျရှကျခကျနလေို့သူ့ဆီလညျးတမနကျလုံးမရောကျဖွဈဘူး။ ညနပေိုငျးကြောငျးဆငျးခါနီးလောကျမှ အားလို့မမလေးမကျြနှာ အခစားဝငျဖို့ သခြာင်ျဆောငျဘကျ ခွဦေးလှညျ့ရတော့ တာပေါ့။ သခြာင်ျဆောငျရှရေ့ောကျတော့ ဘယျသူမှလညျးမတှတေ့ော့ဘူး။ ကြှနျတျောတော့ လာရတာမောတာပဲလို့တှေးနတေုနျးနောကျခပျ လှမျးလှမျးကနေ”ဟဲ့ ကိုဇငျ တနလေုံ့းဘယျစျောဆီ သှားနလေဲ” ဆိုတဲ့ ကြှနျတေျာ့ ရှမေငျးသမီးလေးအသံကို ကွားရပါလရေော။ ကြှနျတျောလညျးဝမျးသာအားရနဲ့သူ့ဆီ အပွေးတပိုငျးသှားပွီး ရှငျးပွရပါလရေော။ဒါတောငျ မမကစိတျကောကျ နသေေးတာဗြ။ အဲ့တုနျးကကိုတှကေအတှေ့အကွုံမှ မရှိသေးတာ။သူကို့ကို ကွှနေတောမသိဘူးလေ။သူစိတျကောကျပွတေဲ့ အခြိနျကမြှ ” နအငျားရငျ ငါ့ကို ဘုရားလိုကျပို့ပေးပါလား”တဲ့ ။ဒီကကောကငျလညျး ၂ခါမပွောရဘူးလေ။ဒါမြိုးတယျသှကျတာ။ဂကျြေကတာငျ အဘ ချေါရလောကျတယျ။သူပွောလို့တောငျ မဆုံးသေးဘူး။”နဘငျယျပဲ သှားသှားငါလိုကျပို့ပေးမယျ”တှဘောတှဖွေဈကုနျရော။
သူကတော့ မကျြစောငျးလှလှလေးထိုးရငျးပေါ့။ကြှနျတျောကလညျး ကြှနျတျောမှေးရာပါစတိုငျ သှားလေးဖွဲပွီးဟီးဟီးလုပျနရေုံပဲလေ:-):-)။ ဘုရားရောကျတော့ သူနဲ့ကြှနျတျောကသူငယျခငျြးတှဆေိုပမေဲ့ ဖိနပျခြှတျတဲ့ နရောရောကျတော့ ကြှနျတေျာ့ဖိနပျကို သူကိုငျပေးတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရထငျဲတမြှိူးပဲဗြာ။တခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ အရာတခုကို ခံစားလိုရကတယျ။ဘုရားတူတူ ရှဈခိုးရငျးသူအရငျ စကားစပွောတယျ “နအငျရကျသောကျတတျလား”တဲ့။ ကြှနျတျောလညျးလိရမတာပေါ့။ ငါမသောကျ တတျပါဘူးလို့။အရကျနံ့တောငျ မခံနိုဘငျူးလို့လေ..ဟိ ..ဟိ ။မလိမျလို့လညျးမရဘူးလေ။အမှနျတိုငျးပွောလိုရကငျ ဘယျဖွဈမလဲ။လူလညျကရြတာပေါ့။သူလညျးကြှနျတေျာ့မကျြနှာ အနေအထားရယျ အသံ အနိမျ့ အမွငျ့ကို နားထောငျပွီး ယုံသှားပုံရတယျ။
ကနြျော ပွောတာကို စိတျဝငျတစားနားထောငျနတေဲ့ ပုံလေးက အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတယျဗြ ကနြျောလညျး ကွညျ့ရငျးနဲ့ မရညျရှယျပဲ လှတျခနဲ ပွောမိသှားတယျ ” လှလိုကျတာ နှငျးရယျ ၊ နငျအရမျးလှတယျ ” ….. ” အို. …..နငျနျော ပေါကျကရတှေ လာပွော မနနေဲ့ ” ရှကျဝဲဝဲအသံလေးနဲ့ ထအျောတယျ ကနြျောလညျး ” နငျ့ကို ငါလေ ငါ. …… ” အဲ့မှာ စကားက ထှကျမလာတော့ဘူး။ သူလညျးအားမလိုအားမရ ဖွဈလာပုံရတယျ. … “နငျ ငါ့ကို ကွိုရကဲ့သားနဲ့ဘာလို့ ဖှင့ျေမပွာတာလညျး”ဆိုတော့ … ကြှနျတျောလညျး…”နငျ ငါ့ကို ခမငျခငျှငျ့ကို အလှဲသုံးစားလုပျတဲ့ လူလို့ ထသငျှားမှာဆိုးလို့ပါဟာ”…ဆိုပွီးတျောကီလျှရတငျး…” ပွောလကျစနဲ့ပွောပါရစေ”ဆိုပွီး..”ငါနငျ့ကို ကြောငျးမှာ စတှေ့ကတညျးကနငျ့မကျြဝနျးလေးတှကွေားမှာငါကရြှုံးခဲ့ရတာပါ”.. ဘာညာဆိုပွီးပှားလိုကျတော့ သူ့မကျြနှာလေးအောကျငုံ့သှားတယျ။
အဲ့အခြိနျမှာမထမငျှတျထားဘူး…သူ့ဆီကအဖွေခကျြခငျြးရမယျလို့။ သူက”ငါလညျးနငျ့ကိုခဈြမိနတောကွာပါပွီ “တဲ့ ။ နောကျမှ သိရတာကသူကို ကြှနျတျော ကူညီပေးလိုကျတဲ့ အခြိနျကစပွီးခဈြသှားတာတဲ့။အဲ့လိုနဲ့ သမီးရညျးစားတှေ ဖွဈသှားတာပေါ့ဗြာ။သမီးရညျးစားဖွဈပွီးနောကျပိုငျးသူ ကြှနျတေျာ့ကို တအားဂရုစိုကျတယျဗြ။ကြှနျတျောနဲ့ ပတျသကျပွီးအသေးစိတျကအစ သူ မှတျမိတယျ။
အဲ့လို ခဈြသူမြိုးမလိုခငျြ ကွဘူးလားဗြာ။ ဥပမာဗြာ…ကြှနျတျော ဘယျနဘေ့ယျအကြီင်ျဘယျအရောငျလေး ဝတျတယျကအစပေါ့ဗြာ။သူကပွောသေးတယျ “ကိုနဲ့ခဈြသွူဖျရစတာ သူ အိပျမကျ မကျနသေလိုပဲ”…တဲ့ လေ။ဘာလို့လညျးမေးတော့ “ကို့ စိတျထဲမှာDotaပဲရှိတာလေ။ခဈြမှ မရှိတာ။သူငယျခငျြး ဘဝတုနျးကလညျးကို အမွဲတမျးဂိမျးဆိုပငျဲသှားနတောဆိုတော့ ခဈြမှ ခဈြတျရတဲ့တှေးနတော”တဲ့ လေ။သူအဲ့လိုပွောလကြှေနျတျောပိုပွီး ခဈြမိလပေဲပေါ့ဗြာ။ နောကျတပတျ ကြောငျးဖှငျ့ခြိနျ ကတြော့ အတနျးတကျခစြငိတျ မရှိလို့သူ့အဆောမငျှာသူ့ကို ချေါပွီးသမ်မတရျုရပှရငျုံကို ယှနျးတာပေါ့။ ရျုရပှရငျုံထဲရောကျတာနဲ့ကြှနျတျောစိတျတှကေထလာတာ။မထပဲ နမေလား။
ကြှနျတေျာ့ကို ပွောငျပွလိုကျ နကွောစကေို့ နှုတျခမျးလေး တလှုပျလှုပျနဲ့ စာွးပနေတော့ ။အဲ့နှုတျခမျးလေးကို အသညျး ယားလာတော့ တာပေါ့။ဒါပမေဲ့ ရညျးစားဦးလအေတှေ့ အကွုံကလညျးမရှိသေးတော့ မနမျးရဲသေးဘူး။အဲ့ ဒါနဲ့ လကျေကလးကိုလငိုကျ ပခုံးလေးဖကျလိုကျ လကျမောငျးသား လေးတှပှေတျပေးလိုကျနဲ့introစဝရငျေတာ့တာပေါ့ ။ ရျုရပှငျပွတာ၁၅မိနဈလောကျကွာတော့ သူနားကပျပွီး”ခဈြလေး မကျြစိလေးခဏလောကျ မှိတျပေးပါလား”…သူကလညျး… ” ဘာလုပျမို့လညျးဒီမှာရျုရပှငျ ကွညျ့နတေယျလေ”ကြှနျတျောလညျး ငွိမျနရေတော့ တာပေါ့။သူပွောတာလဲဟုတျနတောပဲလခေိ။ ကြှနျတျောကိုကမစဉျးစားပဲပွောလိုကျမိတာကို ….ခကျပွီပေါ့။
ခဏလောကျကွာတော့ ကြှနျတေျာ့လကျကို ကုတျပွီး တိုးတိုးလေးပွောတယျ။”မကျြစိမှိတျထားတယျတဲ့”ကြှနျတျောလညျး ဘျရယမလဲ။ရတဲ့ အခှငျ့အရေးကို သုံးတာပေါ့ ။လကျေကလး ပါးလေးကို အသာယာပှတျပေးရငျးခေါငျးလေးကို လကျနဲ့ အသာယာဆှဲမော့လိုကျတယျ။ပွီးတော့ ကြှနျတျော အမွဲရခငျုရနတဲ့ မကျြဝနျးလေးကို ပထမဆုံးနမျးလိုကျတယျ။နောကျ ပါးလေး၂ဖကျ ဘယျပွနျညာပွနျ နမျးလိုကျတော့ သူ့ဆီကရှကျဝဲဝဲအသံလေးနဲ့ ” တျောပွီကှာမဆိုးနဲ့တော့ “တဲ့ ။”ခဏလေးပါကှာဒီမှာနတျသမီး အနမျးလေးနဲ့မိတျဆကျခလြငို့ပါကှာ”ဆိုပွီးဖွီးဖွနျးရတာပေါ့ ချချ။ ပွနျတှေးရငျ ရငျတောငျ တုနျတယျ။သူလညျးနတျသမီးအနမျးဆိုတော့ သိခပြငျုံရတယျ ငွိမျငွိမျလေးနနေတေယျ။ သူသိခတြငျဲ့ နတျသမီးအနမျးပထမခွေလှမျးကို ညညငျသငျာသာ လေးပဲသူ့နှုတျခမျးပျေါခပြေးလိုကျတယျ။နောကျတော့ ဒုတိယခွေလှမျးလှမျးတဲ့ အနေနဲ့နှုတျခမျးဖူးဖူးလုံးလုံးလေးကို အပျေါတလှညျ့ အောကျတလှညျ့နဲ့ဆှဲဈုရပငျးကစားနလေိုကျတယျ။
အဲ့လို ကစားနရေငျးသူ့ဆီကမောသံလိုလို ဘာလိုလို အသျရကှုသံ ပွငျးပွငျးကွားတဲ့ အခြိနျရောကျတော့ တတိယခွေလှမျးတဲ့ အနေနဲ့ လြှာလေးကို သူ့နှုတျခမျးလှာထဲအသာယာထိုးထညျ့ သူ့လြှာလေးနဲ့ ကစားနလေိုကျတယျ။အဲ့လိုကစားရငျးနဲ့လကျကသူ့ရှရေအငျစုံပျေါ လှညျ့ပတျပွီးပှတျသပျပေးရငျးသူကောငျးလာပွီ ဆိုတာသိတော့ .. ကနျြတဲ့ လကျတဖကျကခါးကထမိနျကို အသာဖွညျခပြွီးလကျကို အထဲကတောပငျူစာလေးပျေါမှာတပျစှဲခိုငျးထားလိုကျတယျ။ ဘယျလို ပွောရမလညျးမုနျ့ဖိုပျေါကထုတျလာတဲ့ လတျလတျဆတျဆတျ မုနျ့တုံးလေးကို ကိုထငျားရသလိုပဲဗြာ။ နူးညံ့ပွီးနှေးထှေးလိုကျတာမြား… လကျကို တောပငျူစာအောကျကခြိုငျ့ဝှမျးတဲ့ သှငျးမယျ လုပျတော့…. “မလုပျနဲ့ ခဈြ ဟိုဒငျးဟိုဟာတှလောနတေယျ”တဲ့။ …သေရောဗြာ။…အဲ့နကေ့တကယျကို တောငျပွနျ ပျေါဆနျးမှေးပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အဲ့လိုဖွဈပွီး၁ရကျ ၂ရကျလောကျတော့ တယောကျ မကျြနှာ တယောကျ မကွညျ့ရဲသေးဘူးဗြ။၃ရကျ ၄ရကျလောကျ ကွာမှ ပုံမှနျပွနျ ဖွဈသှားတာ။လူကတော့ သိပျေမကနြပျဘူးပေါ့ဗြာ။ဘယျ ကနြေပျမလဲ …တောငျပွနျဘဝနဲ့ပွနျလာရတဲ့ဟာကို :-:-…။ နောကျတခါကတြော့ အေးအေးဆေးဆေးတှဖေို့ ဘိကောငျးကောငျးလိုရကှာရတာပေါ့။
အဲ့ ဒီမှာတငျ နရောတနေရာကို သှားတှတေ့ယျ။ရလေယျ ကြောကျတနျးဘုရားနားကပါဒကွီးဘကျမှာ တညျးခိုခနျးကောငျးကောငျးလေးတှမေိ့တာပွောတာပါ။ ခဈြသူကိုတော့ ဘုရားသှားဖူးမယျ ဘာညာပွောတော့ ဟိုကလညျးကိုယျ့ နောကျကို လိုကျလာတာပေါ့ ။သနျလဘြငျကျ ရောကျတော့ အရဆငျုံး ဘုရားဖူးကွတယျ ကြိုကျခေါကျဘုရားပျေါမှာ၂ယောကျတူတူ ဘုရားရသေပ်ပာယျ။ပွီးတော့ သူ ဘုရားရှဈခိုးတာလေးကို ထိုငျကွညျ့မိတော့ ကိုယျ့ ခဈြသူမို့ ကိုယျပွောတာမဟုတျဘူး။ တကယျအရမျးလှတယျ မကျြနှာလေးကဝိုငျးဝိုငျးလေးမကျြခုံးမကျြလုံး ကောငျးကောငျးလေးနဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျ စတိုငျလေးဗြ။ဒါပမေဲ့ ကိုယျလုံးကတြော့ ကြှနျတေျာ့ ခဈြသူလေးကသာတာပေါ့ ချချ။:-):-):-) “ဘုရားဖူးပွီးလိပျဥတူးဖို့ပဲကနျြတယျ” …ပွောတော့ မကျြစောငျးလှလှလေးတခကျြ ဒိုငျးခနဲပဲ။
အဲ့ မကျြစောငျးမှာကညျြဆံပါရငျ ကြှနျနေျာ့ ရအငျုံတခုလုံးမှစာကွဲသှားမှာ ချချ။ခုနကဇာတျလမျးကို ပွနျဆျေရကအာငျ။တျောကွာစာဖတျနတေဲ့ သျရယငျးတှမေတ်ေတာပို့နကွေအုံးမယျ ။ ဘုရားပျေါကဆငျးတော့ ဘယျသှားမှာလညျးလို့ သူမေးတော့ ကြှနျတျောကအေးအေးဆေးဆေးစကားပွောလို့ ရတဲ့ နရောပါပေါ့။ ဘာပေါ့ ညာပေါ့ပေါ့။သူကသိပျေမပွာပါဘူး။ရျုရပှရငျုံထဲကအတိုငျး မလျုရပငျ ပွီးရောတဲ့။ကွိုသိနသေလားအောကျမရေ့တယျ။ အဲ့တညျးခိုခနျးလေးကို သှားပွီးအခနျးတခနျးယူ။ပွီးတော့ ရသေနျ့တဗူးရယျ စားစရာအခြို့မှာပွီးစကားပဲပွောမှာပါဘာမှ မလုပျပါတို့ ဘာဖွဈတယျတို့ ညာဖွဈတယျ တို့နဲ့ နှဈသိမျ့ရတယျ။ဒါပမေဲ့ သိတယျမလား။ကိုယျတှကေလုပျပွီဆို အဆုံး။ဟိဟိ ။ တကယျတမျးကတြော့ ဘယျကစလုပျလို့ လျုရပမှနျးမသိဘူး။ စကားလေးပွနျဆျေရကအာငျ။… အခနျးထဲရောကျတာနဲ့စားစရာတှထေားပွီးအိမျသာ အရငျပွေးရတယျ။
လူကွီးပွောတာကွားဖူးလို့လဘောတဲ့ စျောနဲ့ နမေယျ ဆိုရငျ အရဆငျုံးထုပဈလိုရကတယျတဲ့ အဲ့ ဒါမှ ကွာကွာစိမျ ဆှဲနိုမငျှာလေ။စိတျတှလှျေုရပှားနလေို့လားမသိဘူး။ ၅မိနဈ လောကျပဲကွာလိုကျတယျ။ထုတာအရညျတှပွေဈခနဲပဲ.. ပနျးထှကျလာတာ။တျောသေးတာပေါ့ ..မထုပဲတနျးတပျခါမှ ထှကျသှားရငျ ဒုက်ခလို့ ။..တျောကွာတပျပွီးခါမှ ထှကျသှားရငျ တပျထှကျ ဆိုတဲ့ နာမညျ ပိုဆငိုရငျေတာ့မလို့။ကံကောငျးသှားတယျလို့ တှေးမိတယျ။ အိမျသာထဲမှာကိစ်စတှရှေငျးဆေးကွောသုတျသငျပွီးခဈြသူလေး အနားကို တဖွညျးဖွညျးတိုးပွီးလကျကိုလငိုကျ ပါးနမျးလိုကျနဲ့ ဇာတျလမျးအရငျ စရတာပေါ့။နမျးရငျးအရှိနျတကျလာတောသူ့ နို့လုံးလုံးလေးတှကေို အကြီင်ျပျေါကပဲကိုငျပွီးအသာယာပဲပှတျသပျ ပေးလိုကျတယျ။တဖွညျးဖွညျးကွယျသီးဖျွုရတတာပေါ့။အဲ့လို ဖွုတျနတေုနျးလညျးအရသာခံ မကွညျ့မိတော့ဘူး။အပျေါပိုငျးတခုလုံး ရှငျးလငျးသှားမှ သခြောကွညျ့မိတယျ။
သူ့နို့လေးတှကေအရမျးလှတာပဲဗြာလုံးဝိုငျးပွီးတော့ အပျေါကို တကျနသေလားအောကျမရေ့အောငျ တငျးတငျးလေးပနျးသှေးရောငျ နို့သီးခေါငျးလေးကလညျးထှကျတောငျ မထှကျခငျြသေးဘူး။ ကွညျ့နရေငျးစိတျမထိနျးနိုတငျာနဲ့ ကလေးနို့စို့သလို တပွှတျပွှတျ မွညျအောငျ စို့ပေးလိုကျ လြှာလေးနဲ့ နို့သီးခေါငျးလေးကို ဝလုံး ဝိုငျးပေးလိုကျ လုပျနရေတာအရသာပဲဗြာ။ပွနျတှေးလိုကျတိုငျး အငယျကောကငျ ထထလာတယျ။နို့စို့ခံရတာကွာတော့ သူ့နို့လေးတှနောလာတယျ ထတငျယျ။မခံနိုငျတော့ဘူးရပျတော့တဲ့။ အဲ့ဒီအခါကမြှ အောကျပိုငျးကို သတိရတော့တယျ။ထမိနျတော့ ဘယျအခြိနျကကြှတျသှားလညျးမသိဘူးဖွူဝငျးတဲ့ ပေါငျးတှငျးသားလေးတှအေလယျမှာပနျးခွံလေးလား အောကျမရေ့အောငျ ပနျးရောငျ ပတငျီလေးနဲ့ .. “အရမျးလှလိုကျတာနှငျးရယျ”.. လို့ … ကြှနျတေျာ့နှုတျဖြားကခဏခဏပွောရလောကျအောငျ ပဲဗြာ။
အတှငျးခံလေးကို ဆှဲခြှတျလိုကျတော့ အသားဖွူတဲ့ မိနျးမ အရျရညှမျးတယျ ဆိုတဲ့ စကားကတကယျမှနျတာသိလိုရကတယျ။ သူ့ဆီကထှကျတဲ့ အရညျကဘောငျးဘီခှကွားတခုလုံး ရှဲနဈနတောပဲဗြာ။ ဖွူဖှေးတောငျ့စငျးနတေဲ့ ပေါတငျံ ၂ခြောငျးရဲ့အလယျက ရှကွေုပျလေးကလှလိုကျတာဗြာ။အကှဲကွောငျးလေးတောငျ မထဘငျူး။သူလညျးရှကျလာတယျ ထတငျယျ။ဘာလုပျနတောလဲကှာ ဘာလို့ အဲ့လောကျထိ ကွညျ့နတောလညျး..ဆိုမှ ကြှနျတျေ့လညျး သတိဝလငျာတယျ။အဲ့လို သတိလကျလှတျ ငေးရအောငျ လှတဲ့ ပိပိကို တခါမှ မမွဖငျူးဘူး။အမှေးအမကြငျလညျးဆီးခုံပျေါမှာ ရေးရေးလေးတှနေဲ့..အလယျကပိပိအကှဲကွောငျးလေးတလြှောကျ လကျခြောငျးလေးနဲ့ အစုနျဆနျ ဆှဲလိုရကပငျဲသူ့ဆီကအဖြားတကျလို့ ငွီးသံလိုလို အသံတှထှေကျလာလေရော။.. “အာဘယျလိုကွီးလုပျနတောလညျးကှာဒီမှာတမြိုးကွီးပဲ မနေတတျတော့ဘူးလုပျစရာရှိ တာလုပျလေ”..
ကြှနျတျောလညျး”ခဏလေးပါကှာဒီအခြိနျလျုရပငျ နှငျးနာမှာပေါ့ အဲ့ဒါကွောငျ့ အစပွုနတောပါကှာ”.. နှုတျခမျးသားနှဈဖကျကို အသာဖွဲလိုကျတော့ ပနျးနုရောငျ အတှငျးသားဖြော့ဖြော့လေးနဲ့အလယျနားကအသားဖုလိုလို အစေ့လိုလို နရောလေးကိုလညျးတှရေ့ောစိတျထဲမှာရှံ့တာလညျး မရှိတော့ဘူး။လြှာလေးနဲ့ အစိလေးကို ထိလိုကျ အတှငျးသား တလြှောကျ ယကျလိုကျ အလုပျမြားနေတော့တာ။ကြှနျတျော အဲ့လိုလုပျလေလေ။သူ ပိုညညျးလေလေပဲ။ အဲ့လို လုပျနရေငျး၁၅မိနဈလောကျကွာတော့ သူ့အောကျပိုငျး ကွှတကျလာပွီးပေါငျ ၂ဖကျနဲ့ကြှနျတေျာ့ခေါငျးကို အတငျးညှပျထားတာခေါငျးပါပွုတျထှကျ မတတျပဲ။နဲနဲလေးကွာမှ ပွနျွေဖပေးတာ။”နှငျးဘာဖွဈသှားလညျးမသိဘူးကိုရယျ အမွငျ့ကွီးအထိ ရောကျပွီးပွနျပွုတျကလြာသလို ပဲတဲ့”..။ ကြှနျတျောလညျးကွားဖူးနားဝစကားလေးနဲ့”နှငျးအဲ့ဒါပွီးသှားတာ ဖွဈမယျ”..ပွောရငျးသူ့အပျေါဘကျကို ပွနျတကျတော့ မရှံဘူးလား တဲ့ ညဈညဈ ပတျပတျကွီးကို တဲ့။ ကြှနျတျောလညျးဒါရှံ့စရာမှ မဟုတျတာပဲ။
ကိုယျ့ခဈြသူမကျြနှာလေးကို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ပွီးငါလုပျပေးတာ သူကောငျးနပေါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ လူကို ကွကျသီးတောငျ ထတယျ ပွောတော့ သူရယျပါလေရော။အဲ့လိုရယျနတေုနျးအောကျက ကောကငို သူ့အပေါကျဝနားတပေ့ေးတော့ “အဆုံးထိ ခဈြမလို့လား နှငျးကွောကျတယျတဲ့ “ပွောတော့ သူဘာကွောကျလညျးကြှနျတျော သိနေတော့ “မကွောကျပါနဲ့ ကို့မှာဆေးပါပါတယျလို့ “ပွောရငျး ကြှငျးထဲထညျ့လိုကျတာမဝပငျဲခြျောထှကျသှားတယျ။အပေါကျက အရညျတှနေဲ့ရှဲနတောတောငျ ကွပျနတေယျ။နောကျတကွိမျကတြော့ ခေါငျးကို သခြောထိနျးကိုငျပွီးအပေါကျထဲထညျ့တာ ကှမျးသီးခေါငျးလေးဝသငျှားတယျ။ သူ့မကျြနှာကွညျ့တော့ အံကို ကွိတျထားသလိုပဲမကျြစိမှိတျပွီး ငွိမျနတော။ရလားဆကျထညျ့လို့ အဆငျပွလေားဆိုတော့ ရတယျ ဆကျလုပျတဲ့။အိုကတောပေါ့ မီးစိမျးပွလိုကျတာနဲ့ တပွိုနငျကျ တရဈခငျြးဆီ တိုးသှားတာတဝကျလောကျထိ ဝငျသေးတယျ။
အဲ့ ဝငျနတေဲ့ တဝကျလောကျကိုပဲမှနျမှနျလေးအသှငျးထုတျ လုပျနရေငျး ဆီးခုံးခငျြးထိ တဲ့ ဖတျဆိုတဲ့ အသံကွားတော့ အောကျကို ငုံ့ကွညျ့လိုကျတာအဆုံးထိ ဝသငျှားပွီ။အဲ့အခါကြှငျးစိရမတဲ့ အရသာကို သိတော့တာအရမျးကောငျးတယျဗြာ။ ဘယျလို အရသာမှနျးပွောပွလို့ ကို မတတျဘူး။နှေးထှေးပွီး စိုစှတျတဲ့ ဂူလေးထဲဝငျနရေသလို တမြိုးလေးဗြာ။အဆုံးထိ ဝသငျှားပွီ ကိုယျ စလုပျတော့မယျနျော ဆိုတော့ အငျးတဲ့ ။ကြှနျတျောလညျး အစပိုငျးတော့ အသှငျးအထုတျ နှေးးနှေးလေးနဲ့ တိုကျစဈ စ ဖှငျ့ရတာပေါ့။ အရမျးအရသာရှိတယျဗြာ. …တကယျကို ကွပျကွပျစေးစေးလေး လုပျလိုကျတိုငျး ကောငျးတဲ့အရသာက လူကိုစိုးမိုးထားတော့ ခဏလေးနဲ့ ပွီးခငျြလာတယျ ဒါပမေဲ့ပွီးလိုကျရငျလညျး တကိုယျကောငျးဆနျရာကမြှာဆိုးတော့ ကိုဇျောဦး ရေးထားတဲ့ ပနျးဘုရငျမလေးစာအုပျက ဘျောလီဘောပုတျသလို လုပျပါဆိုတဲ့ နညျးလေးကို သတိရမိတယျ။
အဲ့ဒါနဲ့ အဲ့နညျးလေးအတိုငျး ကိုဆောငျ့လိုကျတိုငျး တုနျတုနျတကျသှားတဲ့ နို့လေး ၂ဖကျကို အရသာခံရငျး ဘောလီဘောပုတျသလို လုပျကွညျ့လိုကျတယျ နညျးလေးက မဆိုးဘူးဗြ ပွီးခငျြစိတျပြောကျသှားတယျ ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကွမျးကွမျးလေး ဆောငျ့လိုကျ နှေးနှေးလေး ပွနျဆောငျ့လိုကျ လုပျနတေုနျး ….. ” ကိုရေ ခဈြတမြိုးကွီးဖွဈလာပွီကှာ.၊ မွနျမွနျဆောငျ့ပေးပါ၊ခဈြမနနေိုငျတော့ဘူး “…… ကနြျောလညျး သူပွီး ခငျြလာတာ သိတော့ သူပွောတဲ့အတိုငျး ခပျမွနျမွနျလေး ဆောငျ့ပေးလိုကျတော့ အခကျြ ၂၀လောကျအရောကျမှာ ကနြေျာ့ကို အတငျးဖကျတှယျပွီး တဆတျဆတျတုနျနပေါရော……. အဲ့အခြိနျမှာ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာ တမြိုးကွီးပဲဗြာ ဆိုလိုခငျြတာက. ကိုခဈြတဲ့လူကို ပွီးအောငျလုပျပေးလိုကျရလို့ သူကောငျးသှားတာ မွငျရတော့ ကိုလညျး အတိုငျးမသိဝမျးသာမိတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောမပွီးသေးတော့. .” ကိုမပွီးသေးဘူးကှာ ဆကျလုပျခငျြသေးတယျ ခှငျ့တောငျးတော့ “……. ” အငျး…ကို့သဘောလတေဲ့ ” အဲ့ဒါနဲ့ ကနြျောလညျး ” လေးဘကျထောကျပေးပါလား ဟိုလေ ခှေးထီးက ခှေးမကို နောကျက လုပျသလိုလေ ” ဆိုတော့ ကနြေျာ့ပေါငျကို ဆှဲဆိတျလိုကျတာမြားဗြာ အဲ့အကွောငျးတှေးတိုငျး ပေါငျက အခုထိ စပျဖဉျြးဖဉျြးနဲ့ ဟိဟိ ” ကိုနျော အတတျကောငျးတှေ မထှငျနဲ့ကှာ….. ” လို့ ပွောသာပွောတယျ ပွီးတော့ လေးဘကျကုနျးပေးတယျ….
သူနောကျမှာနရေငျး အပေါကျဝကိုတကွေ့ညျ့တာ နဲနဲလေးနိမျ့နတေယျ အံမဝငျဘူးပေါ့ဗြာ အဲ့ဒါနဲ့ ဖငျဘူးတောငျး ထောငျလိုကျကှာဆိုတော့ ပွောတဲ့ အတိုငျး နပေေးရှာတယျ အဲ့တော့မှ အဖုတျလေးက ပျေါလာတော့တယျ စောစောက လုပျထားတဲ့ အရှိနျကွောငျ့ထငျတယျ အဖုတျလေးက ဖောငျးကားနတောပဲ အလယျအမွောငျးလေးကလညျး ခဈြရညျကွညျလေးတှေ စီးကနြပေုံမြားဗြာ ကို့ခဈြသူမို့လို့လား မသိဘူး အရမျးလှတာပဲ…..ကဲကဲ အာလူးဖုတျတာ မြားသှားပွီ ဇာတျလမျးပွနျစမှ ချချ သူ့နောကျကနေ ဒူးထောကျပွီး အဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို အကှဲကွောငျးတလြှောကျ ပှတျဆှဲလိုကျတော့…. ” အာ့…..ကိုရယျ ဘယျလိုလုပျနတောလညျးကှာ၊ ဒီမှာ မနတေတျတော့ဘူး ၊ မွနျမွနျလုပျတော့ကှာ ” …ကနြျောလညျး အခြိနျမဆှဲတော့ပဲ ဒဈလေးကို အဖုတျဝလေးတပွေီ့း အသာယာခြော့သှငျးလိုကျတယျ…. ” အားပါးပါး….စောစောက လုပျထားလို့ အရညျတှရှေဲနတောတောငျ ၊ ခဈြဟာလေးက ကွပျလိုကျတာကှာ ” လို့ပွောတော့ ရှကျဝဲဝဲလေးနဲ့ အျောပါလရေော ” ကိုနျော… ဘာတှပွေောနတောလညျး ရှကျစရာကွီး….” ကနြျောလညျး စခငျြစိတျက ပျေါလာတော့ ” မရှကျပါနဲ့ မွရယျ ကိုအောငျ ဘောငျးဘီခြှတျတာ ရခြေိုးမို့ပါဆိုတော့ ” အားပါးပါးရိုကျလိုကျတာဗြာ ပေါငျကို ရဲထှတျသှားတာပဲ…… သူရှကျသှားမှနျးသိတော့ ဆကျမစတော့ပဲ လုပျဖို့ပဲ အာရုံစိုကျထားလိုကျတော့တယျ လေးဘကျကုနျးနတောကို နောကျကလုပျရတာ အရသာတကယျရှိတယျဗြ။
လုပျဖူးတဲ့ သယျရငျးတှေ သိမှာပါ မကျြနှာလေးနဲ့ နို့လေးကို မမွငျရပမေဲ့ လုပျလိုကျတိုငျး တုနျတုနျနတေဲ့ ဖငျတုံးလေးကို ကွညျ့ရငျး လုပျရတော့ စိတျကို ကွာကွာမထိနျးနိုငျတော့ တဖနျးဖနျးမွညျအောငျ ဆောငျ့လိုကျရငျး သုတျရညျတှကေို တှငျးရဲ့ အနကျရှိုငျးဆုံးနရောမှာ ပနျးထုတျရငျး ပွီးသှားတော့တယျ…..ပထမဆုံးအကွိမျလုပျဖူးလို့လား မသိဘူး ဆားငံရညျသောကျရသလိုပဲ ဘယျလောကျသောကျသောကျ မဝဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ မကျြနှာအနှံ့တရှိုကျမကျမကျနမျးရငျး ဒဈဖြားလေးကို သူ့ခြာတိတျမလေး အပေါကျဝမှာတပွေီ့း ခြော့သှငျးလိုကျတော့ သံရှညျဆှဲသံလေး ” အာ့….လုပျပွနျပွီဆိုပွီး ” တငျပါးကို ကော့ကော့ပေးရငျးနဲ့……… တကယျပါပဲဗြာ အဲ့တကွောငျးပွီးတော့ သူဆှလိုကျ ကိုဆှလိုကျနဲ့ တယောကျတလှညျ့ ဆှပွီး ၂ ယောကျသား တကျညီလကျညီ မီးကုနျယမျးကုနျကြဲလိုကျတာ တညျးခိုခနျးကနေ အိမျကို မိုးစုနျးစုနျးခြုပျမှ ပွနျရောကျတော့တယျ ။
ဘယျလောကျထိ ကွမျးမိလညျး မသိပါဘူးဗြာ….နှငျးရော ကနြျောရော နောကျနေ့ ကြောငျးတောငျ မတကျနိုငျကွဘူး ချချ……ကိုတှကေ အဲ့လိုမြိုး လုပျရငျလညျး မထနိုငျတဲ့အထိ လုပျပဈတာ ချခိ…… နောကျပိုငျးကတြော့လညျး ၂ ယောကျသား အားတာနဲ့ တညျးခိုခနျးပဲ သှားဖွဈတော့တယျ အရသာတှပေုံ့မြား ပွောပါတယျ…… အခြိနျတှကေ ကုနျတာမွနျပုံမြား ဘာလိုလိုနဲ့ ဒေးသမားတှေ စာမေးပှဲဖွနေရေပွီ သူတို့ပွီးရငျ ကိုတှအေလှညျ့ဆိုတော့ ၂ ယောကျသား အရငျကလို မသှားနိုငျတော့ဘူး စာပဲ အဓိကဦးစားပေးနရေတော့တာ….. ဒီလိုနဲ့ စာမေးပှဲဖွတေဲ့နရေ့ောကျဖို့ တပတျလောကျပဲ လိုတော့တယျ ကြောငျးကို နောကျဆုံးအကွိမျတကျရတဲ့ အပတျမှာပေါ့ ။ ကနြျောလညျး ခဈြသူလေးနဲ့ တခါလောကျတော့ တူတူနခေငျြသေးတယျ တကွိမျလောကျပေါ့…အဲ့ဒါနဲ့ နှငျးကို စာသငျခနျးထဲကနေ ထှကျလာဖို့ အခကျြပွရငျး နီးစပျရာတညျးခိုခနျးတှကေို ခေါငျးထဲမှာ လိုကျရှာမိနတေယျ….နှငျးလညျး ထှကျလာရော သူ့လကျကိုဆှဲပွီး ” ကိုတို့ စာမေးပှဲဖွနေတေဲ့ အခြိနျရော။
စာမေးပှဲမဖွခေငျ တပတျကွီးရော မတှပေဲ့ နရေမှာ….ကို နှငျးနဲ့ အားရပါးရ ခဈြခငျြတယျကှာ. ” လို့ဆိုတော့ ” ဟှနျ့. …ဒါပဲတှေးနတေယျ…ဒါပမေဲ့ နှငျးက ကို့ကို ခဈြတော့လညျး ကို့သဘောပါပဲရှငျတဲ့ ” ပွောပုံက မသိရငျ ကနြျောပဲ လိုခငျြနပေုံနဲ့ သူက မလိုခငျြတဲ့ အတိုငျးပဲ…..ဒါပမေဲ့ မပွောဖွဈလိူကျပါဘူး တျောကွာ စိတျကောကျပွီး နလေ့ညျစာအငတျထားနအေုံးမယျ ချချ ။ ဒီနတေ့ော့ ဘယျပုံစံ ဘယျလိုအနအေထားနဲ့ ဆှဲမယျဆိုပွီး တှေးရငျး တက်ကစီငှားဖို့ ကြောငျးအပွငျကို ထှကျတုနျး ဗွုနျးဆို ဘေးနားမှာ ကားအဖွူလှလှလေး တစီးထိုးရပျပွီး ကားထဲက အသကျကွီးကွီးမိနျးမတယောကျ ဆငျးလာတယျ…… အဲ့အခြိနျမှာပဲ ” ဟငျ….မမေလေိုကျလာတယျဆိုပွီး ” ကွောကျရှံ့ပွီး သူ့မကျြနှာလေးဖွူဆှတျသှားပုံမြားဗြာ ပွနျတှေးတိုငျး ခဈြသူလေးကို သနားမိတယျ….
ဒါပမေဲ့ သူ့အမကေ ဘာမှမပွောပါဘူး သူ့သမီးကို ကားထဲဝငျဖို့ အခကျြပွပွီး သူကိုယျတိုငျ ကားထဲ ပွနျဝငျထိုငျနတေယျ…. ” ကို…နှငျးသှားတော့မယျ…စာမေးပှဲဖွမှေ တှကွေ့မယျနျော ” ဆိုပွီး အပွေးတပိုငျးနဲ့ ကားပျေါတကျသှားတယျ။ကနြျောလညျး ဒုတိယအကွိမျ တောငျပွနျဘဝပေါ့ဗြာ… အဲ့လိုနဲ့ ပထမနှဈနောကျဆုံးစာမေးပှဲကွီး စဖွရေပွီ…..ဒါပမေဲ့ဗြာ စာမေးပှဲဖွရေတဲ့ ၈ ရကျလုံးလုံး နှငျးမကျြနှာလေး မမွငျရဘူးဗြာ……ရငျထဲမှာ တမြိုးပဲ သူ့အဆောငျကို သှားတိုငျး သူ့အိမျက ကားလာကွိုသှားတယျပဲ သူ့သူငယျခငျြးတှပွေောသမြှ နားထောငျပွီး ၈ရကျလုံးလုံး ခေါငျးငိုကျစိုကျ ငိုကျစိုကျနဲ့ အိမျပွနျနတေော့ အမကေ မဖွနေိုငျဘူး ထငျပွီး စိတျပူနတေော အဲ့တော့လညျ့း အမစေိတျကနြေပျအောငျ ပြျောခငျြယောငျဆောငျပွရတာပေါ့….။
စာမေးပှဲဖွပွေီးလို့ နောကျတနကေ့တြော့ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတာနဲ့ သူ့အိမျကို ဖုနျးဆကျမိသှားတယျ ဒါပမေဲ့ အိမျအကူကောငျမလေး ပွောလိုကျတဲ့ စကားက နှခေေါငျခေါငျမှာ မိုးကွိုးပဈခလြိုကျသလိုပဲဗြာ ” မမလေး စောစောကပဲ လဆေိပျကို သှားတယျ ” ကနြျောလညျး ” လဆေိပျကို ဘာသှားလုပျတာလညျး မေးမိတော့ ” …. ” အမရေိကားက သူ့အကိုက လှမျးချေါလို့ သူတို့ တမိသားစုလုံး သှားမှာတဲ့ ” ….. သှားပွီ. ….တဘဝစာ ဝေးပွီလား နှငျးရယျ ကိုအရမျးခဈြတတျမှ ဘာလို့ သှားရတာလညျး မသှားပါနဲ့ မသှားပါနဲ့ကှာလို့ စိတျထဲက အျောဟဈပွီး လဆေိပျကို သှားဖို့ တက်ကစီတစီး အပွေးတပိုငျး ငှားမိတယျ…. လဆေိပျထဲရောကျတော့ နှငျးကို အရူးတယောကျလိုပဲ အပွေးတပိုငျးနဲ့ လိုကျရှာမိတယျ သိပျမရှာလိုကျရဘူး ။
ကုတျအကငြ်္ီအဖွူရောငျ ၊ ဂငျြးဘောငျးဘီအဖွူရောငျလေးနဲ့ လှခငျြတိုငျး လှနတေဲ့ ခဈြရသူကို တှတေ့ယျ ဒါပမေဲ့ လှမျးချေါမယျလုပျပမေဲ့ မချေါဖွဈခဲ့ပါဘူး အဝေးကပဲ သူ့ကို ငေးကွညျ့ရငျး ကနြေျာ့အမွငျအာရုံတှေ မှုနျဝါးလာလို့ အမှတျတမဲ့ မကျြလုံးကို ပှတျလိုကျတော့ ပါးပွငျမှာ မကျြရညျစီးကွောငျးက တသှငျသှငျနဲ့ ခဈြသူလေးကတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဝေးသှားတာပေါ့ဗြာ……. လဆေိပျက အပွနျ ကားပါကငျဘကျကို ဝငျမိတော့ စိုငျးစိုငျးသီခငျြး ” ဖွူ ဖွူစငျစငျ ကောငျမလေးကို တကယျကွငျကွငျနာနာ ခဈြခဲ့လညျး အခုတော့ နာနာကငျြကငျြနှုတျဆကျရပွီ တာ့တာ ” တဲ့ဗြာ. .လူက ငိုခငျြနပေါတယျဆိုမှဗြာ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဘယျသူတောငျးစားမြား လကျကမွငျးကွောထပွီး သီခငျြးလာဖှငျ့လညျးဆိုပွီး ဘုရှိုး ရှိုးဖို့ လှညျ့အကွ ညျ့ လူကို စပျဖွဲဖွဲမကျြနှာပေးနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့ လှတပတ ကောငျမလေးကိုတှတေ့ော့ ဒေါသတှေ ဘယျရောကျသှားမှနျးတောငျ မသိတော့ဘူးဗြာ…….. ။
နှငျးရေ ကို့ဘဝက နှငျးကို လှမျးတာတောငျ ကောငျးကောငျးမလှမျးရပါဘူးကှာဆိုပွီး ကားပါကငျကို ကြျောလှနျ၍ ကားဂိတျမှာ ထိုငျရငျး bus ကားစောငျ့နမေိတော့သညျ။ ဘာလိုလိုနဲ့ နှငျး ကနြေျာ့ကို ခှဲသှားတာ ၆လ လောကျကွာသှားပွီဗြာ။ ကနြေျာ့စိတျထဲမှာတော့ မနတေ့နအေ့တိုငျးပဲ ပွနျတှေးတိုငျး နာကငျြမိတယျ ။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယနှဈ ရောကျလာပမေဲ့ ကနြေျာ့စိတျအစဉျကတော့ ပထမနှဈမှာပဲ ကနျြခဲ့တယျ ။ကြောငျးမှာ အတနျးအားတိုငျး နှငျးတကျခဲ့တဲ့ သခြာင်ျဆောငျလေးမှာ ထိုငျရငျး နှငျးအကွောငျး စဉျးစားနမေိတယျဗြာ ။အဲ့လို အသှားကောငျးလို့ ဒုတိယမွောကျနတျသမီးနဲ့ ထပျဆုံမိတယျပဲ ဆိုပါဆို့ သယျရငျးတို့လညျး သိခငျြမှာပေါ့နျော ။အဖွဈပကျြက ဒီလိုဗြာ ။ ဒီနရောမှာ ၂ ပါးသှားလေး ၁ပုဒျလောကျ စဖှငျ့လိုကျရအောငျ ချချ။ စုလဲ့မိုး ကမြက ဒုတိယနှဈမှ တောငျကွီးကနေ ရနျကုနျကို ကြောငျးပွောငျးလာတာပါ။ဒီရောကျတော့ သငျတနျးတှေ တကျခငျြသေးတော့ ကြောငျးကို အဝေးသငျပဲ ယူလိုကျတော့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယမွောကျကြောငျးမှာ ပထမဆုံးအကွိမျကြောငျးတကျဖို့ စဉျးစားမိတော့ ကြောငျးကလညျး ကို့အတှကျ အသဈ ပတျဝနျးကငျြ နရောဒသေကလညျး အသဈဆိုတော့ အစစအရာရာ ကမြအတှကျ အသဈအဆနျးတှပေါပဲရှငျ။
ပွောရငျ ကွှားသလိုဖွဈနပေါ့မယျရှငျ…..ကမြတို့ သခြာင်ျမဂြောမှာ ကမြက စတားပဲလေ။တောငျကွီးမှာတုနျးက ပွောပါတယျ….ဘယျယောကျြားကိုမှ ရငျမခုနျတတျတဲ့ကမြ မှတျမှတျရရ ကြောငျးစတကျပွီး ၁ ပတျလောကျအကွာမှာ ကမြရငျထဲကို ကောငျလေးတယောကျတိုးဝငျလာခဲ့တယျ။ကမြ သူ့ကို ကွညျ့လိုကျတိုငျး ကမြတို့အခနျးကို သူအမွဲကွညျ့နတေယျ။ဒါပမေဲ့ သူ့မကျြဝနျးတှကေို ကွညျ့မိတိုငျး အမွဲမကျြရညျဝဲနတေတျတယျ။ အဲ့ဒါနဲ့ကမြလညျး သူငယျခငျြးတှဆေီက စုံစမျးကွညျ့တော့ အဲ့ကောငျလေး နာမညျက ကိုဇငျတဲ့ ….သူက သူ့ကောငျမလေးကို သိပျခဈြတာ အခုသူ့ကောငျမလေးက နိုငျငံခွားထှကျသှားတော့ သူ့ကောငျမလေး တကျခဲ့တဲ့ အဆောငျမှာ လာပွီး အလှမျးဖွနေတောတဲ့……. အဲ့သတငျးကိုကွားလိုကျရပွီး ကမြရငျထဲ ဘယျလိုဖွဈသှားမှနျး မသိဘူးရှငျ။ အမွဲညှိးငယျနတေဲ့ သူ့မကျြနှာလေးကို ပွုံးစခေငျြတယျ…မကျြရညျတှေ ရဈဝိုငျးနတေဲ့ သူ့မကျြဝနျးလေးတှကေို အရငျလို လငျးလကျနစေခေငျြတယျ။ဒါနဲ့ပဲ ကမြက စပွီး……… တနေ့ ကနြျော ထိုငျနကေနြရောလေးမှာ ထိုငျပွီး နှငျးအခနျးကို ငေးနတေုနျး ကနြေျာ့ရှမှေ့ာ အရိပျကလေး တရိပျလာရပျနတေယျ။ရုတျတရကျဆိုတော့ နှငျးမြား ပွနျလာတာလားဆိုပွီး မကျြနှာ မော့ကွညျ့လိုကျတော့ နှငျးမဟုတျပါဘူး ကနြျော မသိတဲ့ မိနျးမတယောကျပဲ ။
အဲ့ဒါနဲ့ ကနြျောလညျး ဘယျသူလညျး ဘာကွောငျ့ ဒီနားလာရပျတာလညျးဆိုပွီး စဉျးစားနတေုနျး တဈရှုးလေးတရှကျ ကမျးလာတဲ့ လကျဖွူဖွူလေး တဖကျကို မွငျရတယျ။လှလိုကျတဲ့ လကျခြောငျးလေးတှဗြော ဖွူနုပွီး သှယျလလြိုကျတာမြား အရမျးခဈြဖို့ကောငျးတယျ ကနြျောငေးနတေုနျး ” ကောငျလေး မငျးမကျြဝနျးက မကျြရညျတှေ သုတျလိုကျတဲ့ ” အမိနျ့သံလိုလို တောငျးဆိုတဲ့ အသံလိုလိုကွားလိုကျရတယျ ကနြျောလညျး အလိုလိုပဲ အဲ့တဈရှုးလေးကို ယူပွီး မကျြရညျတှေ သုတျရငျး ကြေးဇူးတငျပါတယျပေါ့ဘာပေါ့ညာပေါ့ ချချ အဲ့လိုနဲ့ တယောကျနဲ့တယောကျ နာမညျတှေ ကိုယျစီပွောပွရငျး ခငျမငျသှားကွတယျ………. ဒီနတေ့ော့ ကမြဘဝမှာ အပြျောဆုံးနပေဲ့ရှငျ ။ကမြခဈြတဲ့ ကောငျလေးနဲ့ စကားတှေ အမြားကွီး ပွောဖွဈကွတယျ။သူ့အပွုံးတှေ သူ့အကွညျ့တှေ နှုတျခမျးလှုပျယုံသာ ပွောတတျတဲ့ စကားသံခြိုခြိုလေးတှေ အားလုံးကို ကမြ တပျမကျတယျ ၊ ပိုငျဆိုငျခွငျတယျ ။ကုနျကုနျပွောရရငျ ကမြဘဝတခုလုံး သူ့အတှကျ ပေးဖို့အသငျ့ပဲ ။ ကမြတို့ သံယောဇဉျကို ပိုပွီးခိုငျမာစတေဲ့ နလေ့ေးတနရေ့ောကျလာတယျ အဲ့နလေ့ေးမှာ ရာသီဥတုက အရမျးသာယာတယျ ။
ကမြလညျး ကြောငျးပိတျပမေဲ့ ဘာကွောငျ့လညျး မသိဘူး သူ့ကို အရမျးတှခေ့ငျြလာတယျ။ အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဆီကို ဖုနျးဆကျဖို့ ဖုနျးခှကျကို လကျက လှမျးလိုကျရငျး…….. ညက ညလုံးပေါကျ ဂိမျးဆော့ထားတော့ လူက အိပျခငျြနပွေီဗြာ ဒါနဲ့ အိပျယာပျေါလှဲခလြိုကျတော့ ဘေးနား ဖုနျးက ထမွညျပါလရေော ” ဟဲ့ သောကျပလုတျတုတျ…မနကျအစောကွီး ဘယျက ဖုနျးလဲကှ ” ဆိုပွီး ဖုနျးနံပါတျကွညျ့လိုကျတော့ စုလဲ့မိုးဆီက ဖွဈနတေယျ။အဲ့ဒါ ကောကျကိုငျပွီး. …. ” ဟဲလို….မိုး…..အစောကွီး ဘာကိစ်စလညျး သယျရငျးရာ ” ဆိုတော့ ” ကိုဇငျ….နငျအားရငျ ငါ့ကို ကနျတျောကွီးလိုကျပို့ပါလား….ငါ ရနျကုနျရောကျတာ မကွာသေးတော့ မသှားတတျလို့ပါ ” ဆိုပွီး ခခယယလေးပွောတော့ နဂိုတညျးက အညှာလှယျ အယုံလှယျတဲ့ ကနြျောက သယျရငျးက အကူညီတောငျးတာပဲဆိုပွီး မအိပျတော့ပဲ အိပျယာကနေ အလူးလဲထပွီး ရမေိုးခြိုးရတော့တာပေါ့……
ဒီနသေူ့နဲ့အပွငျမှာ ၂ယောကျထညျး တှရေ့တော့မယျဆိုတော့ ကမြစိတျတှေ အရမျးလှုပျရှားမိတယျရှငျ…. အဲ့နမှေ့ာပဲ ကမြတို့ သံယောဇဉျကို တဆငျ့တိုးခဲ့တယျ ကမြဘကျကပဲ စရတာပါ ။ဖွဈပုံကတော့ ဒီလိုရှငျ့……. သူနဲ့ ခြိနျးထားတဲ့ ကနျတျောကွီး အဝငျဝနားရောကျလလေေ ကမြ ရငျခုနျသံတှေ မွနျလလေပေဲ ရှငျ ခြိနျးထားတဲ့ နရောမှာ သူရောကျနတောတှတေ့ော့ ကမြ အရမျးပြျောသှားတယျ သူ့ကိုတှတေ့ော့ ” ကိုဇငျ….ရောကျနတော ကွာပွီလားဟငျ ” သူလညျး ” မကွာသေးပါဘူး မိုးရဲ့ စောစောကတငျ ရောကျတာ ” အဲ့ဒါနဲ့ သူ့လကျမောငျးကို တှဲပွီး ကနျတျောကွီးထဲ ဝငျမယျလုပျတော့ သူ ကမြကို အံ့အားသငျ့သလို အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့တယျ…ကမြလညျး “ဘာကွညျ့တာလညျး တို့လှလို့လား” ဆိုတော့ သူပွုံးပွီး တဖကျလှညျ့သှားတယျ သူ့ အဲ့ဒီအမူအယာလေးကို ကမြအရမျးခဈြတာပဲ။
ပွီးတော့ ကမြခဈြတဲ့ လူလကျမောငျးကို တှဲပွီး ကနျတျောကွီးထဲ လမျးလြှောကျရတဲ့ အရသာကို ကမြ အရမျးကွိုကျတယျ အရမျးလညျး တနျဖိုးထားမိတယျ။ လြှောကျတာ နဲနဲကွာလာတော့ ” ကိုဇငျရယျ ထိုငျကွရအောငျကှာ…တို့ အရမျးညောငျးလာပွီ” လို့ကမြပွောတော့ သူလညျး ဟိုနရောက ကောငျးတယျတဲ့ သူပွတဲ့နရောကို ကွညျ့လိုကျတော့ ရစေပျနားလေး ဘေးမှာလညျး ပနျးပငျတှေ ဖုံးထားတော့ တကယျ့ခွုံတော အသေးစားလေးလိုပဲ…ဟှနျ့သူအရမျးလညျတယျရှငျ့ အဲ့နရောကို သူမို့ ကွံကွံဖနျဖနျတှတေ့ယျ….. သူပွတဲ့နရောလေးမှာပဲ ကမြတို့ထိုငျရငျး ” ကိုဇငျ တို့ကို သီခငျြးဆိုပွပါလားကှာ ကိုဇငျ့အသံလေးက အရမျးနားထောငျလို့ကောငျးတယျ ” လို့ ကမြပွောလိုကျတော့ ရှကျဝဲဝဲလေးဖွဈသှားတဲ့ ကောငျလေးကို ကမြအသညျးယားပွီး ဖကျနမျးမိတော့မလို့ရှငျ ချချ။ သူအသံသွသွလေးနဲ့ သီခငျြးဆိုပွနတေုနျး ကမြ သူ့ပခုံးပျေါမှာ မှီပွီး နားထောငျနလေိုကျတယျ သူဆိုပွတဲ့ သီခငျြးလေးက အဲ့တုနျးက ခတျေစားနတေဲ့ ဉာဏျလငျးအောငျရဲ့ သူငယျခငျြးဆိုတဲ့ သီခငျြးလေးလေ ။သူ့အသံနဲ့ အရမျးလိုကျတာပဲရှငျ ။အဲ့လောကျထိ အဆိုကောငျးလိမျ့မယျလို့ ကမြ မထငျထားဘူး…… တကယျဆိုးတဲ့ သူငယျခငျြးလေးဗြာ ။ကနြေျာ့ကိုပနျးခွံထဲမှာ အရှကျကှဲအောငျ သီခငျြးအတငျးဆိုခိုငျးတော့တာပဲ။ ကနြျော ရှကျလိုကျတာဗြာ ။
ဒါပမေဲ့ သူက ကို့သူငယျခငျြးပဲလဆေိုပွီး အဲ့ခတျေက ရပေနျးစားနတေဲ့ သူငယျခငျြးသီခငျြးကို ဆိုပွလိုကျတယျ ဆိုနတေုနျး ကနြေျာ့ရငျခှငျထဲ ခေါငျးမှီပွီး နားထောငျနတော တကယျ့ကလေးလေးလိုပဲ ။ ဆိုနတေဲ့ သီခငျြးလေးလညျးဆုံးရော ကနြျောကို မော့ကွညျ့တဲ့ မကျြဝနျးလေးတှထေဲမှာ မြှျောလငျ့နတေဲ့ အကွညျ့လေးတှေ တှတေ့ော့ ကနြျောလညျး ဘာဖွဈသှားလညျး မသိဘူးဗြာ သူ့နှုတျခမျးပါးပါးလေးကို အသာယာပဲ စှဲစုပျမိသှားတယျ ။ဒါပမေဲ့ သူ့ဘကျက ငွငျးဆနျတာမြိုး မရှိတော့ ကနြျောလညျး လြှာကို သူ့ပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့ပွီး သူ့လြှာလေးကို အပွငျကို ချေါထုတျလာရတာပေါ့ တကယျမနမျးတတျသေးတဲ့ အူရိုငျးလေးလား မသိပါဘူးဗြာ…..ကနြျောကပဲ အစအဆုံး ဦးဆောငျပေးရတယျ….. လြှာခငျြး ကလိရငျး အခွနေကေောငျးလာတော့ လကျကို သူ့ရငျသားလေးပျေါ တငျလိုကျတော့ သူတခကျြ တုနျသှားတယျ ဒါပမေဲ့ လကျကို လာမဖယျပါဘူး…..ကနြေျာ့သဘောပဲလို့ အခကျြပေးလိုကျသလိုပဲ. ….ကနြျောလညျး ထိနျးထားသမြှ စိတျကို အကုနျလှတျပေးလိုကျတယျ နို့ ၂လုံးကို စိတျရှိလကျရှိ အားရပါးရကိုငျတှယျ ဆုပျနယျပွီး လကျက အောကျက စကပျအောကျကို သှငျးလိုကျတော့ ပထမဆုံး ထိတှရေ့တဲ့ ပေါငျတှငျးသားလေးတှကေ နူးညံ့လိုကျတာဗြာ ။
အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့ ပေါငျတှငျးသားတှကေို တရှရှပှတျသပျပေးပွီး အလယျက ဖောငျးမို့မို့တောငျကုနျးပျေါလကျက ရောကျသှားတယျ…..သူလညျး စိတျလာနပေုံရတယျ သူ့ပိပိလေး ဖောငျးကားနတောမြား လကျနဲ့ ခပျအုပျအုပျလေးကိုငျထားပွီး ခပျရှရှလေးဖိလိုကျရငျပဲ အရညျတှတေောကျတောကျကလြာပါလရေော သူ့ပငျတီလေးဆို ရှဲနဈနတောပဲ ကနြျောလညျး အခြိနျသိပျမဖွုနျးတော့ပဲ ရတုနျးလေး ကိုငျနိုငျသလောကျ ကိုငျမှ ဆိုပွီး ပငျတီအောကျကို လကျညှိးသှငျးပွီး မွှောငျးလေးတလြှောကျ အထကျအောကျဆှဲပေးလိုကျတော့ ” မောငျ…ဘယျလိုလုပျနတောလညျးကှာ…မ ခံစားရတာ တမြိုးပဲကှာ. …မွနျမွနျလေး ပှတျပေးပါ….မ ကောငျးလာပွီ…..အဟငျးဟငျး……ကောငျးတယျ မောငျရာ ” ဆိုပွီး တောကျလြှောကျညညျးပါလရေော….. ကနြျောလညျး ဘယျလောကျထိပှတျပေးလညျး ဆိုရငျ သူ့ပိပိလေးမှာ အရညျသာမရှိရငျ မီးပါထပှငျ့ မတတျကို လုပျပေးမိတယျ ။စတေနာတှပေေါ့ဗြာ ချချ….. အဲ့လိုလုပျပေးနရေငျး သူပွီးသှားတယျထငျတယျ သူ့တကိုယျလုံးတုနျပွီး ကနြျောကို တငျးတငျးဖကျပွီး အရမျးခဈြတယျ မောငျရယျ ။ ကနြေျာ့တို့ ကံကောငျးပုံမြား ကိုကရညျးစားစကားပွောစရာ မလိုဘူး ……… ပွီးပါပွီ။
တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… အမှတ်တရရှိတဲ့အေကြာင်းလေးတခုပေါ့ဗျာ။… အဲ့နေ့ကမှတ်မှတ်ရရ၁၂ရက်နေ့၅လပိုင်းလောက်ကပေါ့။ အေဝးသင် မေဂျာတွေစဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့။အေဝးသင် မေဂျာဆိုလို့ ပြောရအုံးမယ်။ကျွန်တော်တို့ သိပ္ပံမေဂျာသမားတွေက၁ပတ်ခြား ၊အပတ်စဉ် စနေ၊တနင်္ဂနွေပဲ တက်ရတာလေ။ဒါပေမဲ့ အဲ့လို တပတ်ကို ၂ရက်ပဲ တက်ရတာလေးတောင် ကျွန်တော် စိတ်မပါဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေဆိုတာကကောင်းတာထက် မေကာင်းတာဆိုရင် ပိုပြီး ဝါသနာပါကြတာကိုးဗျ။(မှတ်ချက် ။။ဆရာကြီးဒီဇိုင်းဖမ်းပြီးပြောခြင်း။ ဟိဟိ ) အဲ့လိုနဲ့ကျောင်းကို ရောက်လာတယ်ပဲဆိုပါတော့။… အဲ့မှာစတွေ့တာဗျဇာတ်လမ်းကအခုမှ စလာတာ။ကျောင်းထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ကို ပန်းပေါင်းစုံ ခင်းကျင်းထားတဲ့ ပြပွဲလားအောက်မေ့ ရလောက်အောင် ဒီဇိုင်းအစုံအလင်နဲ့ ကျောင်းသူမမများကို တွေ့ရေတာ့တာပဲ။
အဲ့ထဲမှာအထူးခြားဆုံးတယောက်ကတော့ဗျာ ကဗျာဆန်ဆန် ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ညှိ့ယူသွားတဲ့ မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်လေးပေါ့ ။သူပုံစံက ဖတ်နေကြ အပြာစာအုပ်တွေထဲကလို တောင့်တောင့် ထွားထွားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ ပိန်ပိန် ရှည်ရှည်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အနေတော်လေးပဲ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ အံကိုက်ပဲပေါ့။ကျွန်တော်က အစစအရာရာမှာဇီဇာကြောင်တတ်တဲ့ လူလေ။အဲ့လို ဇီဇာကြောင်လွန်းလို့ အခုချိန်ထိ ရည်းစားဆိုပြီးလက်ဆုပ် လက်ကိုင်ပြစရာကို မရှိဘူး။သူနဲ့တွေ့မှ ကိုရိန်မိုးသီချင်းလို ဖြစ်သွားတော့တယ်။… “မင်းနဲ့တွေ့မှ မခိုင်တဲ့ နှလုံးသား ၊ တုန်ရီနေပြီ ချစ်လေးရေ”…အဲ့လိုလေးပေါ့။ လေရှည်နေတယ် မထင်ကြပါနဲ့ဗျာ။ဖီးလေးတက်နေလို့ပါခ်ခ် ။… မြင်မြင်ချင်းပဲ ချစ်မိသွားတာဆိုတော့ သူ့အကြောင်းစုံစမ်းရတော့ တာပေါ့ဗျာ။။သူ့နာမည်လေးကခိုင်ခင်နှင်းတဲ့ သူတက်တဲ့ မေဂျာက သချာင်္ကလေ။အဲ့လိုစုံစမ်းပေးတဲ့ ဘော်ဒါကိုလည်းကျေးဇူး ပြုရသေးတာပေါ့ဗျာ။စုံစမ်းတဲ့ အကြောင်းတော့ အကျယ်တဝင့် မရေးတော့ပါဘူး။လေရှည်နေတယ် ထင်မှာဆိုးလို့ ဟိဟိ။ သူ့နောက်ကိုလိုက် သူမသိအောင် ငေးကြည့် “လျှောက်ပြန်သံပေး ခြေအေးဝမ်းယောင် “တလလောက် လုပ်ပြီးတော့ ရလာတဲ့ အကျိုးဆက်ကသူ ကျွန်တော့်ကို သတိထားမိ လာတယ်ပေါ့ ဗျာ။
အဲ့လိုနဲ့ တနေ့ကျတော့ ကျွန်တော်ပဲကံကောင်းချင်တာလား..သူပဲ ကံဆိုးချင်တာလားတော့ မသိဘူး။သူစီးလာတဲ့ ဖိနပ်လေးက ရုတ်တရက် ပြတ်သွားပါလေရော။သူလည်းစိတ်တော်တော် ပျက်နေပုံရတယ် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့။ကျွန်တော်လည်း မယောင်မလည်နဲ့အနားကို ကပ်ပြီးရည်းစကားမပြောပါဘူး။ ” ဘာများကူညီပေးရမလဲအမပေါ့ “သူကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်ပြီး” ဒီမှာလေနှင်းဖိနပ်လေးပြတ်သွားလို့ အဲ့ ဒါဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာ”လို့ ပြန်ပြောတယ်။သူ အဲ့လို ချိုချိုသာသာပြန်ပြောမယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်ထားမိဘူး။ အဲ့ ဒီတုန်းကကြားလိုက်ရတဲ့ အသံလေးကအရမ်းကို ချိုမြိန်လွန်းလို့ ဆားငံ ရေ၁၀ခွက်လောက် သောက်လည်းချိုနေတယ်ပဲ ထင်မိမှာ။…ဆောရီးအခုမှ အချစ်ကိုတွေ့သွားလို့ …ကဗျာဆန်နေ မိတယ်။အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း”ကျွန်တော် ကူညီပါရစေ”ဆိုပြီး ဟိုလူကြီးတွေရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကို ခဏယူသုံးလိုက်တယ်။ကူညီတယ် ဆိုပေမဲ့ လည်းပြတ်နေတဲ့ ဖိနပ်လေးကို အပ်နဲ့ တွဲပေးလိုက်တာပါ။ ဒီနေရာအပ် ဘယ်ကရသလဲဆိုပြီးမေးတဲ့လူတွေအတွက် အဖြေကတော့ အပ်ကသူ့ဆီကပဲငှားတာပါ။စကားပုံအရဆိုရင် ငါးကြင်းဆီနဲ့ငါးကြင်းပြန် ကြော်တယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲ့ ဒီလို ကူညီပေးရာက စပြီးသူနဲ့ခင်မင်မွု ရခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ သူနဲ့ခင်တာကြာလေသူ့ကိုချစ်တဲ့ စိတ်ကများလာလေလေ ဖြစ်နေတာ့ သူရိပ်မိသွားမလားလည်း ကြောက်ရသေးတယ်ဗျ။ ရလပိုင်း၆ရက်နေ့လောက်ပေါ့ … အဲ့နေ့ကတမနက်လုံးပရက်တီကယ်တွေလက်ချာချိန်တွေနဲ့ ရွုပ်ရှက်ခက်နေလို့သူ့ဆီလည်းတမနက်လုံးမရောက်ဖြစ်ဘူး။ ညနေပိုင်းကျောင်းဆင်းခါနီးလောက်မှ အားလို့မမလေးမျက်နှာ အခစားဝင်ဖို့ သချာင်္ဆောင်ဘက် ခြေဦးလှည့်ရတော့ တာပေါ့။ သချာင်္ဆောင်ရှေ့ရောက်တော့ ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တော့ လာရတာမောတာပဲလို့တွေးနေတုန်းနောက်ခပ် လှမ်းလှမ်းကနေ”ဟဲ့ ကိုဇင် တနေ့လုံးဘယ်စော်ဆီ သွားနေလဲ” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့် ရွေမင်းသမီးလေးအသံကို ကြားရပါလေရော။ ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့သူ့ဆီ အပြေးတပိုင်းသွားပြီး ရှင်းပြရပါလေရော။ဒါတောင် မမကစိတ်ကောက် နေသေးတာဗျ။ အဲ့တုန်းကကိုတွေကအေတွ့အကြုံမှ မရှိသေးတာ။သူကို့ကို ကြွေနေတာမသိဘူးလေ။သူစိတ်ကောက်ပြေတဲ့ အချိန်ကျမှ ” နအင်ားရင် ငါ့ကို ဘုရားလိုက်ပို့ပေးပါလား”တဲ့ ။ဒီကေကာကင်လည်း ၂ခါမေပြာရဘူးလေ။ဒါမျိုးတယ်သွက်တာ။ဂျက်ေကတာင် အဘ ခေါ်ရေလာက်တယ်။သူပြောလို့တောင် မဆုံးသေးဘူး။”နဘင်ယ်ပဲ သွားသွားငါလိုက်ပို့ပေးမယ်”တွေဘာတွေဖြစ်ကုန်ရော။
သူကေတာ့ မျက်စောင်းလှလှလေးထိုးရင်းပေါ့။ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်မွေးရာပါစတိုင် သွားလေးဖြဲပြီးဟီးဟီးလုပ်နေရုံပဲလေ:-):-)။ ဘုရားရောက်တော့ သူနဲ့ကျွန်တော်ကသူငယ်ချင်းတွေဆိုပေမဲ့ ဖိနပ်ချွတ်တဲ့ နေရာရောက်တော့ ကျွန်တော့်ဖိနပ်ကို သူကိုင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော့်ရထင်ဲတမျွိူးပဲဗျာ။တခါမှ မခံစားဖူးတဲ့ အရာတခုကို ခံစားလိုရကတယ်။ဘုရားတူတူ ရှစ်ခိုးရင်းသူအရင် စကားစေပြာတယ် “နအင်ရက်သောက်တတ်လား”တဲ့။ ကျွန်တော်လည်းလိရမတာပေါ့။ ငါမေသာက် တတ်ပါဘူးလို့။အရက်နံ့တောင် မခံနိုဘင်ူးလို့လေ..ဟိ ..ဟိ ။မလိမ်လို့လည်းမရဘူးလေ။အမှန်တိုင်းပြောလိုရကင် ဘယ်ဖြစ်မလဲ။လူလည်ကျရတာပေါ့။သူလည်းကျွန်တော့်မျက်နှာ အေနအထားရယ် အသံ အနိမ့် အမြင့်ကို နားထောင်ပြီး ယုံသွားပုံရတယ်။
ကျနော် ပြောတာကို စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတဲ့ ပုံလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျ ကျနော်လည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ မရည်ရွယ်ပဲ လွတ်ခနဲ ပြောမိသွားတယ် ” လှလိုက်တာ နှင်းရယ် ၊ နင်အရမ်းလှတယ် ” ….. ” အို. …..နင်နော် ပေါက်ကရတွေ လာပြော မနေနဲ့ ” ရှက်ဝဲဝဲအသံလေးနဲ့ ထအော်တယ် ကျနော်လည်း ” နင့်ကို ငါလေ ငါ. …… ” အဲ့မှာ စကားက ထွက်မလာတော့ဘူး။ သူလည်းအားမလိုအားမရ ဖြစ်လာပုံရတယ်. … “နင် ငါ့ကို ကြိုရကဲ့သားနဲ့ဘာလို့ ဖွင့ေ်မပြာတာလည်း”ဆိုတော့ … ကျွန်တော်လည်း…”နင် ငါ့ကို ခမင်ခင်ွင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ လူလို့ ထသင်ွားမှာဆိုးလို့ပါဟာ”…ဆိုပြီးတော်ကီလ်ွရတင်း…” ပြောလက်စနဲ့ပြောပါရေစ”ဆိုပြီး..”ငါနင့်ကို ကျောင်းမှာ စေတွ့ကတည်းကနင့်မျက်ဝန်းလေးတွေကြားမှာငါကျရွုံးခဲ့ရတာပါ”.. ဘာညာဆိုပြီးပွားလိုက်တော့ သူ့မျက်နှာလေးအောက်ငုံ့သွားတယ်။
အဲ့အချိန်မှာမထမင်ှတ်ထားဘူး…သူ့ဆီကအေဖြချက်ချင်းရမယ်လို့။ သူက”ငါလည်းနင့်ကိုချစ်မိနေတာကြာပါပြီ “တဲ့ ။ နောက်မှ သိရတာကသူကို ကျွန်တော် ကူညီပေးလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီးချစ်သွားတာတဲ့။အဲ့လိုနဲ့ သမီးရည်းစားတွေ ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းသူ ကျွန်တော့်ကို တအားဂရုစိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအေသးစိတ်ကအစ သူ မှတ်မိတယ်။
အဲ့လို ချစ်သူမျိုးမလိုချင် ကြဘူးလားဗျာ။ ဥပမာဗျာ…ကျွန်တော် ဘယ်နေ့ဘယ်အကျီင်္ဘယ်အေရာင်လေး ဝတ်တယ်ကအစေပါ့ဗျာ။သူကေပြာသေးတယ် “ကိုနဲ့ချစ်သူ ဖ်ြရစတာ သူ အိပ်မက် မက်နေသလိုပဲ”…တဲ့ လေ။ဘာလို့လည်းမေးတော့ “ကို့ စိတ်ထဲမှာDotaပဲရှိတာလေ။ချစ်မှ မရှိတာ။သူငယ်ချင်း ဘဝတုန်းကလည်းကို အမြဲတမ်းဂိမ်းဆိုပင်ဲသွားနေတာဆိုတော့ ချစ်မှ ချစ်တ်ရတဲ့တွေးနေတာ”တဲ့ လေ။သူအဲ့လိုပြောလေကျွန်တော်ပိုပြီး ချစ်မိလေပဲပေါ့ဗျာ။ နောက်တပတ် ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကျတော့ အတန်းတက်ချစငိတ် မရှိလို့သူ့အေဆာမင်ှာသူ့ကို ခေါ်ပြီးသမ္မတရ်ုရပှရင်ုံကို ယွန်းတာပေါ့။ ရ်ုရပှရင်ုံထဲရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေကထလာတာ။မထပဲ နေမလား။
ကျွန်တော့်ကို ပြောင်ပြလိုက် နေကြာစေ့ကို နွုတ်ခမ်းလေး တလွုပ်လွုပ်နဲ့ စားပြေနေတာ့ ။အဲ့နွုတ်ခမ်းလေးကို အသည်း ယားလာတော့ တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ရည်းစားဦးလေအေတွ့ အကြုံကလည်းမရှိသေးတော့ မနမ်းရဲသေးဘူး။အဲ့ ဒါနဲ့ လက်ေကလးကိုလငိုက် ပခုံးလေးဖက်လိုက် လက်မောင်းသား လေးတွေပွတ်ပေးလိုက်နဲ့introစဝရေင်တာ့တာပေါ့ ။ ရ်ုရပှင်ပြတာ၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူနားကပ်ပြီး”ချစ်လေး မျက်စိလေးခဏေလာက် မှိတ်ပေးပါလား”…သူကလည်း… ” ဘာလုပ်မို့လည်းဒီမှာရ်ုရပှင် ကြည့်နေတယ်လေ”ကျွန်တော်လည်း ငြိမ်နေရေတာ့ တာပေါ့။သူပြောတာလဲဟုတ်နေတာပဲလေခိ။ ကျွန်တော်ကိုကမစဉ်းစားပဲပြောလိုက်မိတာကို ….ခက်ပြီပေါ့။
ခဏေလာက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်လက်ကို ကုတ်ပြီး တိုးတိုးလေးပြောတယ်။”မျက်စိမှိတ်ထားတယ်တဲ့”ကျွန်တော်လည်း ဘ်ရယမလဲ။ရတဲ့ အခွင့်အေရးကို သုံးတာပေါ့ ။လက်ေကလး ပါးလေးကို အသာယာပွတ်ပေးရင်းခေါင်းလေးကို လက်နဲ့ အသာယာဆွဲမော့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော် အမြဲရခင်ုရနတဲ့ မျက်ဝန်းလေးကို ပထမဆုံးနမ်းလိုက်တယ်။နောက် ပါးလေး၂ဖက် ဘယ်ပြန်ညာပြန် နမ်းလိုက်တော့ သူ့ဆီကရှက်ဝဲဝဲအသံလေးနဲ့ ” တော်ပြီကွာမဆိုးနဲ့တော့ “တဲ့ ။”ခဏေလးပါကွာဒီမှာနတ်သမီး အနမ်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ချလငို့ပါကွာ”ဆိုပြီးဖြီးဖြန်းရတာပေါ့ ခ်ခ်။ ပြန်တွေးရင် ရင်တောင် တုန်တယ်။သူလည်းနတ်သမီးအနမ်းဆိုတော့ သိချပင်ုံရတယ် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတယ်။ သူသိချတင်ဲ့ နတ်သမီးအနမ်းပထမေခြလှမ်းကို ညညင်သင်ာသာ လေးပဲသူ့နွုတ်ခမ်းပေါ်ချပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့ ဒုတိယေခြလှမ်းလှမ်းတဲ့ အေနနဲ့နွုတ်ခမ်းဖူးဖူးလုံးလုံးလေးကို အေပ်ါတလှည့် အောက်တလှည့်နဲ့ဆွဲစ်ုရပင်းကစားနေလိုက်တယ်။
အဲ့လို ကစားနေရင်းသူ့ဆီကမောသံလိုလို ဘာလိုလို အသ်ရကွုသံ ပြင်းပြင်းကြားတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ တတိယေခြလှမ်းတဲ့ အေနနဲ့ လျှာလေးကို သူ့နွုတ်ခမ်းလွာထဲအသာယာထိုးထည့် သူ့လျှာလေးနဲ့ ကစားနေလိုက်တယ်။အဲ့လိုကစားရင်းနဲ့လက်ကသူ့ရွေရအင်စုံပေါ် လှည့်ပတ်ပြီးပွတ်သပ်ပေးရင်းသူကောင်းလာပြီ ဆိုတာသိတော့ .. ကျန်တဲ့ လက်တဖက်ကခါးကထမိန်ကို အသာဖြည်ချပြီးလက်ကို အထဲကတောပင်ူစာလေးပေါ်မှာတပ်စွဲခိုင်းထားလိုက်တယ်။ ဘယ်လို ပြောရမလည်းမုန့်ဖိုပေါ်ကထုတ်လာတဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မုန့်တုံးလေးကို ကိုထင်ားရသလိုပဲဗျာ။ နူးညံ့ပြီးနွေးထွေးလိုက်တာများ… လက်ကို တောပင်ူစာအောက်ကချိုင့်ဝှမ်းတဲ့ သွင်းမယ် လုပ်တော့…. “မလုပ်နဲ့ ချစ် ဟိုဒင်းဟိုဟာတွေလာနေတယ်”တဲ့။ …သေရာဗျာ။…အဲ့နေ့ကတကယ်ကို တောင်ပြန် ပေါ်ဆန်းမွေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုဖြစ်ပြီး၁ရက် ၂ရက်လောက်တော့ တေယာက် မျက်နှာ တေယာက် မကြည့်ရဲသေးဘူးဗျ။၃ရက် ၄ရက်လောက် ကြာမှ ပုံမှန်ပြန် ဖြစ်သွားတာ။လူကေတာ့ သိပ်ေမကျနပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘယ် ကျေနပ်မလဲ …တောင်ပြန်ဘဝနဲ့ပြန်လာရတဲ့ဟာကို :-:-…။ နောက်တခါကျတော့ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ဖို့ ဘိကောင်းကောင်းလိုရကှာရတာပေါ့။
အဲ့ ဒီမှာတင် နေရာတေနရာကို သွားတွေ့တယ်။ရေလယ် ကျောက်တန်းဘုရားနားကပါဒကြီးဘက်မှာ တည်းခိုခန်းကောင်းကောင်းလေးတွေ့မိတာပြောတာပါ။ ချစ်သူကိုတော့ ဘုရားသွားဖူးမယ် ဘာညာပြောတော့ ဟိုကလည်းကိုယ့် နောက်ကို လိုက်လာတာပေါ့ ။သန်လျဘင်က် ရောက်တော့ အရဆင်ုံး ဘုရားဖူးကြတယ် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပေါ်မှာ၂ယောက်တူတူ ဘုရားရေသပ္ပာယ်။ပြီးတော့ သူ ဘုရားရှစ်ခိုးတာလေးကို ထိုင်ကြည့်မိတော့ ကိုယ့် ချစ်သူမို့ ကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်အရမ်းလှတယ် မျက်နှာလေးကဝိုင်းဝိုင်းလေးမျက်ခုံးမျက်လုံး ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ စိုးပြည့်သဇင် စတိုင်လေးဗျ။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုံးကျတော့ ကျွန်တော့် ချစ်သူလေးကသာတာပေါ့ ခ်ခ်။:-):-):-) “ဘုရားဖူးပြီးလိပ်ဥတူးဖို့ပဲကျန်တယ်” …ပြောတော့ မျက်စောင်းလှလှလေးတချက် ဒိုင်းခနဲပဲ။
အဲ့ မျက်စောင်းမှာကျည်ဆံပါရင် ကျွန်နော့် ရအင်ုံတခုလုံးမွစာကြဲသွားမှာ ခ်ခ်။ခုနကဇာတ်လမ်းကို ပြန်ဆ်ေရကအာင်။တော်ကြာစာဖတ်နေတဲ့ သ်ရယင်းတွေမေတ္တာပို့နေကြအုံးမယ် ။ ဘုရားပေါ်ကဆင်းတော့ ဘယ်သွားမှာလည်းလို့ သူမေးတော့ ကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောလို့ ရတဲ့ နေရာပါပေါ့။ ဘာပေါ့ ညာပေါ့ပေါ့။သူကသိပ်ေမပြာပါဘူး။ရ်ုရပှရင်ုံထဲကအတိုင်း မလ်ုရပင် ပြီးရောတဲ့။ကြိုသိနေသလားအောက်မေ့ရတယ်။ အဲ့တည်းခိုခန်းလေးကို သွားပြီးအခန်းတခန်းယူ။ပြီးတော့ ရေသန့်တဗူးရယ် စားစရာအချို့မှာပြီးစကားပဲပြောမှာပါဘာမှ မလုပ်ပါတို့ ဘာဖြစ်တယ်တို့ ညာဖြစ်တယ် တို့နဲ့ နှစ်သိမ့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ သိတယ်မလား။ကိုယ်တွေကလုပ်ပြီဆို အဆုံး။ဟိဟိ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဘယ်ကစလုပ်လို့ လ်ုရပမှန်းမသိဘူး။ စကားလေးပြန်ဆ်ေရကအာင်။… အခန်းထဲရောက်တာနဲ့စားစရာတွေထားပြီးအိမ်သာ အရင်ပြေးရတယ်။
လူကြီးပြောတာကြားဖူးလို့လေဘာတဲ့ စော်နဲ့ နေမယ် ဆိုရင် အရဆင်ုံးထုပစ်လိုရကတယ်တဲ့ အဲ့ ဒါမှ ကြာကြာစိမ် ဆွဲနိုမင်ှာလေ။စိတ်တွေလွုရပှားနေလို့လားမသိဘူး။ ၅မိနစ် လောက်ပဲကြာလိုက်တယ်။ထုတာအရည်တွေပြစ်ခနဲပဲ.. ပန်းထွက်လာတာ။တော်သေးတာပေါ့ ..မထုပဲတန်းတပ်ခါမှ ထွက်သွားရင် ဒုက္ခလို့ ။..တော်ကြာတပ်ပြီးခါမှ ထွက်သွားရင် တပ်ထွက် ဆိုတဲ့ နာမည် ပိုဆငိုရေင်တာ့မလို့။ကံကောင်းသွားတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ အိမ်သာထဲမှာကိစ္စတွေရှင်းဆေးကြောသုတ်သင်ပြီးချစ်သူလေး အနားကို တဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးလက်ကိုလငိုက် ပါးနမ်းလိုက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းအရင် စရတာပေါ့။နမ်းရင်းအရှိန်တက်လာတောသူ့ နို့လုံးလုံးလေးတွေကို အကျီင်္ပေါ်ကပဲကိုင်ပြီးအသာယာပဲပွတ်သပ် ပေးလိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းကြယ်သီးဖြုရတတာပေါ့။အဲ့လို ဖြုတ်နေတုန်းလည်းအရသာခံ မကြည့်မိတော့ဘူး။အေပ်ါပိုင်းတခုလုံး ရှင်းလင်းသွားမှ သေချာကြည့်မိတယ်။
သူ့နို့လေးတွေကအရမ်းလှတာပဲဗျာလုံးဝိုင်းပြီးတော့ အေပ်ါကို တက်နေသလားအောက်မေ့ရေအာင် တင်းတင်းလေးပန်းသွေးရောင် နို့သီးခေါင်းလေးကလည်းထွက်တောင် မထွက်ချင်သေးဘူး။ ကြည့်နေရင်းစိတ်မထိန်းနိုတင်ာနဲ့ ကေလးနို့စို့သလို တပြွတ်ပြွတ် မြည်အောင် စို့ပေးလိုက် လျှာလေးနဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို ဝလုံး ဝိုင်းပေးလိုက် လုပ်နေရတာအရသာပဲဗျာ။ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း အငယ်ကောကင် ထထလာတယ်။နို့စို့ခံရတာကြာတော့ သူ့နို့လေးတွေနာလာတယ် ထတင်ယ်။မခံနိုင်တော့ဘူးရပ်တော့တဲ့။ အဲ့ဒီအခါကျမှ အောက်ပိုင်းကို သတိရေတာ့တယ်။ထမိန်တော့ ဘယ်အချိန်ကကျွတ်သွားလည်းမသိဘူးဖြူဝင်းတဲ့ ပေါင်းတွင်းသားလေးတွေအလယ်မှာပန်းခြံလေးလား အောက်မေ့ရေအာင် ပန်းရောင် ပတင်ီလေးနဲ့ .. “အရမ်းလှလိုက်တာနှင်းရယ်”.. လို့ … ကျွန်တော့်နွုတ်ဖျားကခဏခဏပြောရေလာက်အောင် ပဲဗျာ။
အတွင်းခံလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အသားဖြူတဲ့ မိန်းမ အရ်ရညွမ်းတယ် ဆိုတဲ့ စကားကတကယ်မှန်တာသိလိုရကတယ်။ သူ့ဆီကထွက်တဲ့ အရည်ကဘောင်းဘီခွကြားတခုလုံး ရွဲနစ်နေတာပဲဗျာ။ ဖြူဖွေးတောင့်စင်းနေတဲ့ ပေါတင်ံ ၂ချောင်းရဲ့အလယ်က ရွေကြုပ်လေးကလှလိုက်တာဗျာ။အကွဲကြောင်းလေးတောင် မထဘင်ူး။သူလည်းရှက်လာတယ် ထတင်ယ်။ဘာလုပ်နေတာလဲကွာ ဘာလို့ အဲ့လောက်ထိ ကြည့်နေတာလည်း..ဆိုမှ ကျွန်တေ့်လည်း သတိဝလင်ာတယ်။အဲ့လို သတိလက်လွတ် ငေးရေအာင် လှတဲ့ ပိပိကို တခါမှ မမြဖင်ူးဘူး။အေမွးအမျကင်လည်းဆီးခုံပေါ်မှာ ရေးရေးလေးတွေနဲ့..အလယ်ကပိပိအကွဲကြောင်းလေးတေလျှာက် လက်ချောင်းလေးနဲ့ အစုန်ဆန် ဆွဲလိုရကပင်ဲသူ့ဆီကအဖျားတက်လို့ ငြီးသံလိုလို အသံတွေထွက်လာလေရာ။.. “အာဘယ်လိုကြီးလုပ်နေတာလည်းကွာဒီမှာတမျိုးကြီးပဲ မေနတတ်တော့ဘူးလုပ်စရာရှိ တာလုပ်လေ”..
ကျွန်တော်လည်း”ခဏေလးပါကွာဒီအချိန်လ်ုရပင် နှင်းနာမှာပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့် အစပြုနေတာပါကွာ”.. နွုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ကို အသာဖြဲလိုက်တော့ ပန်းနုရောင် အတွင်းသားဖျော့ဖျော့လေးနဲ့အလယ်နားကအသားဖုလိုလို အေစ့လိုလို နေရာလေးကိုလည်းတွေ့ရောစိတ်ထဲမှာရွံ့တာလည်း မရှိတော့ဘူး။လျှာလေးနဲ့ အစိလေးကို ထိလိုက် အတွင်းသား တေလျှာက် ယက်လိုက် အလုပ်များနေတာ့တာ။ကျွန်တော် အဲ့လိုလုပ်လေလ။သူ ပိုညည်းလေလပဲ။ အဲ့လို လုပ်နေရင်း၁၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ သူ့အောက်ပိုင်း ကြွတက်လာပြီးပေါင် ၂ဖက်နဲ့ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အတင်းညှပ်ထားတာခေါင်းပါပြုတ်ထွက် မတတ်ပဲ။နဲနဲလေးကြာမှ ပြန်ေဖြေပးတာ။”နှင်းဘာဖြစ်သွားလည်းမသိဘူးကိုရယ် အမြင့်ကြီးအထိ ရောက်ပြီးပြန်ပြုတ်ကျလာသလို ပဲတဲ့”..။ ကျွန်တော်လည်းကြားဖူးနားဝစကားလေးနဲ့”နှင်းအဲ့ဒါပြီးသွားတာ ဖြစ်မယ်”..ပြောရင်းသူ့အေပ်ါဘက်ကို ပြန်တက်တော့ မရွံဘူးလား တဲ့ ညစ်ညစ် ပတ်ပတ်ကြီးကို တဲ့။ ကျွန်တော်လည်းဒါရွံ့စရာမှ မဟုတ်တာပဲ။
ကိုယ့်ချစ်သူမျက်နှာလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးငါလုပ်ပေးတာ သူကောင်းနေပါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ လူကို ကြက်သီးတောင် ထတယ် ပြောတော့ သူရယ်ပါလေရာ။အဲ့လိုရယ်နေတုန်းအောက်က ကောကငို သူ့အေပါက်ဝနားတေ့ပေးတော့ “အဆုံးထိ ချစ်မလို့လား နှင်းကြောက်တယ်တဲ့ “ပြောတော့ သူဘာကြောက်လည်းကျွန်တော် သိနေတာ့ “မေကြာက်ပါနဲ့ ကို့မှာဆေးပါပါတယ်လို့ “ပြောရင်း ကျွင်းထဲထည့်လိုက်တာမဝပင်ဲချော်ထွက်သွားတယ်။အေပါက်က အရည်တွေနဲ့ရွဲနေတာတောင် ကြပ်နေတယ်။နောက်တကြိမ်ကျတော့ ခေါင်းကို သေချာထိန်းကိုင်ပြီးအေပါက်ထဲထည့်တာ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးဝသင်ွားတယ်။ သူ့မျက်နှာကြည့်တော့ အံကို ကြိတ်ထားသလိုပဲမျက်စိမှိတ်ပြီး ငြိမ်နေတာ။ရလားဆက်ထည့်လို့ အဆင်ပြေလားဆိုတော့ ရတယ် ဆက်လုပ်တဲ့။အိုကေတာပေါ့ မီးစိမ်းပြလိုက်တာနဲ့ တပြိုနင်က် တရစ်ချင်းဆီ တိုးသွားတာတဝက်လောက်ထိ ဝင်သေးတယ်။
အဲ့ ဝင်နေတဲ့ တဝက်လောက်ကိုပဲမှန်မှန်လေးအသွင်းထုတ် လုပ်နေရင်း ဆီးခုံးချင်းထိ တဲ့ ဖတ်ဆိုတဲ့ အသံကြားတော့ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တာအဆုံးထိ ဝသင်ွားပြီ။အဲ့အခါကျွင်းစိရမတဲ့ အရသာကို သိတော့တာအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။ ဘယ်လို အရသာမှန်းပြောပြလို့ ကို မတတ်ဘူး။နွေးထွေးပြီး စိုစွတ်တဲ့ ဂူလေးထဲဝင်နေရသလို တမျိုးလေးဗျာ။အဆုံးထိ ဝသင်ွားပြီ ကိုယ် စလုပ်တော့မယ်နော် ဆိုတော့ အင်းတဲ့ ။ကျွန်တော်လည်း အစပိုင်းတော့ အသွင်းအထုတ် နှေးးနှေးလေးနဲ့ တိုက်စစ် စ ဖွင့်ရတာပေါ့။ အရမ်းအရသာရှိတယ်ဗျာ. …တကယ်ကို ကြပ်ကြပ်စေးစေးလေး လုပ်လိုက်တိုင်း ကောင်းတဲ့အရသာက လူကိုစိုးမိုးထားတော့ ခဏလေးနဲ့ ပြီးချင်လာတယ် ဒါပေမဲ့ပြီးလိုက်ရင်လည်း တကိုယ်ကောင်းဆန်ရာကျမှာဆိုးတော့ ကိုဇော်ဦး ရေးထားတဲ့ ပန်းဘုရင်မလေးစာအုပ်က ဘော်လီဘောပုတ်သလို လုပ်ပါဆိုတဲ့ နည်းလေးကို သတိရမိတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ အဲ့နည်းလေးအတိုင်း ကိုဆောင့်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်တက်သွားတဲ့ နို့လေး ၂ဖက်ကို အရသာခံရင်း ဘောလီဘောပုတ်သလို လုပ်ကြည့်လိုက်တယ် နည်းလေးက မဆိုးဘူးဗျ ပြီးချင်စိတ်ပျောက်သွားတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကြမ်းကြမ်းလေး ဆောင့်လိုက် နှေးနှေးလေး ပြန်ဆောင့်လိုက် လုပ်နေတုန်း ….. ” ကိုရေ ချစ်တမျိုးကြီးဖြစ်လာပြီကွာ.၊ မြန်မြန်ဆောင့်ပေးပါ၊ချစ်မနေနိုင်တော့ဘူး “…… ကျနော်လည်း သူပြီး ချင်လာတာ သိတော့ သူပြောတဲ့အတိုင်း ခပ်မြန်မြန်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ အချက် ၂၀လောက်အရောက်မှာ ကျနော့်ကို အတင်းဖက်တွယ်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်နေပါရော……. အဲ့အချိန်မှာ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲဗျာ ဆိုလိုချင်တာက. ကိုချစ်တဲ့လူကို ပြီးအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရလို့ သူကောင်းသွားတာ မြင်ရတော့ ကိုလည်း အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်မပြီးသေးတော့. .” ကိုမပြီးသေးဘူးကွာ ဆက်လုပ်ချင်သေးတယ် ခွင့်တောင်းတော့ “……. ” အင်း…ကို့သဘောလေတဲ့ ” အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ” လေးဘက်ထောက်ပေးပါလား ဟိုလေ ခွေးထီးက ခွေးမကို နောက်က လုပ်သလိုလေ ” ဆိုတော့ ကျနော့်ပေါင်ကို ဆွဲဆိတ်လိုက်တာများဗျာ အဲ့အကြောင်းတွေးတိုင်း ပေါင်က အခုထိ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ ဟိဟိ ” ကိုနော် အတတ်ကောင်းတွေ မထွင်နဲ့ကွာ….. ” လို့ ပြောသာပြောတယ် ပြီးတော့ လေးဘက်ကုန်းပေးတယ်….
သူနောက်မှာနေရင်း အပေါက်ဝကိုတေ့ကြည့်တာ နဲနဲလေးနိမ့်နေတယ် အံမဝင်ဘူးပေါ့ဗျာ အဲ့ဒါနဲ့ ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်လိုက်ကွာဆိုတော့ ပြောတဲ့ အတိုင်း နေပေးရှာတယ် အဲ့တော့မှ အဖုတ်လေးက ပေါ်လာတော့တယ် စောစောက လုပ်ထားတဲ့ အရှိန်ကြောင့်ထင်တယ် အဖုတ်လေးက ဖောင်းကားနေတာပဲ အလယ်အမြောင်းလေးကလည်း ချစ်ရည်ကြည်လေးတွေ စီးကျနေပုံများဗျာ ကို့ချစ်သူမို့လို့လား မသိဘူး အရမ်းလှတာပဲ…..ကဲကဲ အာလူးဖုတ်တာ များသွားပြီ ဇာတ်လမ်းပြန်စမှ ခ်ခ် သူ့နောက်ကနေ ဒူးထောက်ပြီး အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို အကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်ဆွဲလိုက်တော့…. ” အာ့…..ကိုရယ် ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်းကွာ၊ ဒီမှာ မနေတတ်တော့ဘူး ၊ မြန်မြန်လုပ်တော့ကွာ ” …ကျနော်လည်း အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ဒစ်လေးကို အဖုတ်ဝလေးတေ့ပြီး အသာယာချော့သွင်းလိုက်တယ်…. ” အားပါးပါး….စောစောက လုပ်ထားလို့ အရည်တွေရွဲနေတာတောင် ၊ ချစ်ဟာလေးက ကြပ်လိုက်တာကွာ ” လို့ပြောတော့ ရှက်ဝဲဝဲလေးနဲ့ အော်ပါလေရော ” ကိုနော်… ဘာတွေပြောနေတာလည်း ရှက်စရာကြီး….” ကျနော်လည်း စချင်စိတ်က ပေါ်လာတော့ ” မရှက်ပါနဲ့ မြရယ် ကိုအောင် ဘောင်းဘီချွတ်တာ ရေချိုးမို့ပါဆိုတော့ ” အားပါးပါးရိုက်လိုက်တာဗျာ ပေါင်ကို ရဲထွတ်သွားတာပဲ…… သူရှက်သွားမှန်းသိတော့ ဆက်မစတော့ပဲ လုပ်ဖို့ပဲ အာရုံစိုက်ထားလိုက်တော့တယ် လေးဘက်ကုန်းနေတာကို နောက်ကလုပ်ရတာ အရသာတကယ်ရှိတယ်ဗျ။
လုပ်ဖူးတဲ့ သယ်ရင်းတွေ သိမှာပါ မျက်နှာလေးနဲ့ နို့လေးကို မမြင်ရပေမဲ့ လုပ်လိုက်တိုင်း တုန်တုန်နေတဲ့ ဖင်တုံးလေးကို ကြည့်ရင်း လုပ်ရတော့ စိတ်ကို ကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ တဖန်းဖန်းမြည်အောင် ဆောင့်လိုက်ရင်း သုတ်ရည်တွေကို တွင်းရဲ့ အနက်ရွိုင်းဆုံးနေရာမှာ ပန်းထုတ်ရင်း ပြီးသွားတော့တယ်…..ပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ဖူးလို့လား မသိဘူး ဆားငံရည်သောက်ရသလိုပဲ ဘယ်လောက်သောက်သောက် မဝဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ မျက်နှာအနှံ့တရွိုက်မက်မက်နမ်းရင်း ဒစ်ဖျားလေးကို သူ့ချာတိတ်မလေး အပေါက်ဝမှာတေ့ပြီး ချော့သွင်းလိုက်တော့ သံရှည်ဆွဲသံလေး ” အာ့….လုပ်ပြန်ပြီဆိုပြီး ” တင်ပါးကို ကော့ကော့ပေးရင်းနဲ့……… တကယ်ပါပဲဗျာ အဲ့တကြောင်းပြီးတော့ သူဆွလိုက် ကိုဆွလိုက်နဲ့ တယောက်တလှည့် ဆွပြီး ၂ ယောက်သား တက်ညီလက်ညီ မီးကုန်ယမ်းကုန်ကျဲလိုက်တာ တည်းခိုခန်းကနေ အိမ်ကို မိုးစုန်းစုန်းချုပ်မှ ပြန်ရောက်တော့တယ် ။
ဘယ်လောက်ထိ ကြမ်းမိလည်း မသိပါဘူးဗျာ….နှင်းရော ကျနော်ရော နောက်နေ့ ကျောင်းတောင် မတက်နိုင်ကြဘူး ခ်ခ်……ကိုတွေက အဲ့လိုမျိုး လုပ်ရင်လည်း မထနိုင်တဲ့အထိ လုပ်ပစ်တာ ခ်ခိ…… နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း ၂ ယောက်သား အားတာနဲ့ တည်းခိုခန်းပဲ သွားဖြစ်တော့တယ် အရသာတွေ့ပုံများ ပြောပါတယ်…… အချိန်တွေက ကုန်တာမြန်ပုံများ ဘာလိုလိုနဲ့ ဒေးသမားတွေ စာမေးပွဲဖြေနေရပြီ သူတို့ပြီးရင် ကိုတွေအလှည့်ဆိုတော့ ၂ ယောက်သား အရင်ကလို မသွားနိုင်တော့ဘူး စာပဲ အဓိကဦးစားပေးနေရတော့တာ….. ဒီလိုနဲ့ စာမေးပွဲဖြေတဲ့နေ့ရောက်ဖို့ တပတ်လောက်ပဲ လိုတော့တယ် ကျောင်းကို နောက်ဆုံးအကြိမ်တက်ရတဲ့ အပတ်မှာပေါ့ ။ ကျနော်လည်း ချစ်သူလေးနဲ့ တခါလောက်တော့ တူတူနေချင်သေးတယ် တကြိမ်လောက်ပေါ့…အဲ့ဒါနဲ့ နှင်းကို စာသင်ခန်းထဲကနေ ထွက်လာဖို့ အချက်ပြရင်း နီးစပ်ရာတည်းခိုခန်းတွေကို ခေါင်းထဲမှာ လိုက်ရှာမိနေတယ်….နှင်းလည်း ထွက်လာရော သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး ” ကိုတို့ စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ အချိန်ရော။
စာမေးပွဲမဖြေခင် တပတ်ကြီးရော မတွေ့ပဲ နေရမှာ….ကို နှင်းနဲ့ အားရပါးရ ချစ်ချင်တယ်ကွာ. ” လို့ဆိုတော့ ” ဟွန့်. …ဒါပဲတွေးနေတယ်…ဒါပေမဲ့ နှင်းက ကို့ကို ချစ်တော့လည်း ကို့သဘောပါပဲရှင်တဲ့ ” ပြောပုံက မသိရင် ကျနော်ပဲ လိုချင်နေပုံနဲ့ သူက မလိုချင်တဲ့ အတိုင်းပဲ…..ဒါပေမဲ့ မပြောဖြစ်လိူက်ပါဘူး တော်ကြာ စိတ်ကောက်ပြီး နေ့လည်စာအငတ်ထားနေအုံးမယ် ခ်ခ် ။ ဒီနေ့တော့ ဘယ်ပုံစံ ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ ဆွဲမယ်ဆိုပြီး တွေးရင်း တက္ကစီငှားဖို့ ကျောင်းအပြင်ကို ထွက်တုန်း ဗြုန်းဆို ဘေးနားမှာ ကားအဖြူလှလှလေး တစီးထိုးရပ်ပြီး ကားထဲက အသက်ကြီးကြီးမိန်းမတယောက် ဆင်းလာတယ်…… အဲ့အချိန်မှာပဲ ” ဟင်….မေမေလိုက်လာတယ်ဆိုပြီး ” ကြောက်ရွံ့ပြီး သူ့မျက်နှာလေးဖြူဆွတ်သွားပုံများဗျာ ပြန်တွေးတိုင်း ချစ်သူလေးကို သနားမိတယ်….
ဒါပေမဲ့ သူ့အမေက ဘာမှမပြောပါဘူး သူ့သမီးကို ကားထဲဝင်ဖို့ အချက်ပြပြီး သူကိုယ်တိုင် ကားထဲ ပြန်ဝင်ထိုင်နေတယ်…. ” ကို…နှင်းသွားတော့မယ်…စာမေးပွဲဖြေမှ တွေ့ကြမယ်နော် ” ဆိုပြီး အပြေးတပိုင်းနဲ့ ကားပေါ်တက်သွားတယ်။ကျနော်လည်း ဒုတိယအကြိမ် တောင်ပြန်ဘဝပေါ့ဗျာ… အဲ့လိုနဲ့ ပထမနှစ်နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကြီး စဖြေရပြီ…..ဒါပေမဲ့ဗျာ စာမေးပွဲဖြေရတဲ့ ၈ ရက်လုံးလုံး နှင်းမျက်နှာလေး မမြင်ရဘူးဗျာ……ရင်ထဲမှာ တမျိုးပဲ သူ့အဆောင်ကို သွားတိုင်း သူ့အိမ်က ကားလာကြိုသွားတယ်ပဲ သူ့သူငယ်ချင်းတွေပြောသမျှ နားထောင်ပြီး ၈ရက်လုံးလုံး ခေါင်းငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နဲ့ အိမ်ပြန်နေတော့ အမေက မဖြေနိုင်ဘူး ထင်ပြီး စိတ်ပူနေတော အဲ့တော့လည့်း အမေစိတ်ကျေနပ်အောင် ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်ပြရတာပေါ့….။
စာမေးပွဲဖြေပြီးလို့ နောက်တနေ့ကျတော့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တာနဲ့ သူ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက်မိသွားတယ် ဒါပေမဲ့ အိမ်အကူကောင်မလေး ပြောလိုက်တဲ့ စကားက နွေခေါင်ခေါင်မှာ မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုပဲဗျာ ” မမလေး စောစောကပဲ လေဆိပ်ကို သွားတယ် ” ကျနော်လည်း ” လေဆိပ်ကို ဘာသွားလုပ်တာလည်း မေးမိတော့ ” …. ” အမေရိကားက သူ့အကိုက လှမ်းခေါ်လို့ သူတို့ တမိသားစုလုံး သွားမှာတဲ့ ” ….. သွားပြီ. ….တဘဝစာ ဝေးပြီလား နှင်းရယ် ကိုအရမ်းချစ်တတ်မှ ဘာလို့ သွားရတာလည်း မသွားပါနဲ့ မသွားပါနဲ့ကွာလို့ စိတ်ထဲက အော်ဟစ်ပြီး လေဆိပ်ကို သွားဖို့ တက္ကစီတစီး အပြေးတပိုင်း ငှားမိတယ်…. လေဆိပ်ထဲရောက်တော့ နှင်းကို အရူးတယောက်လိုပဲ အပြေးတပိုင်းနဲ့ လိုက်ရှာမိတယ် သိပ်မရှာလိုက်ရဘူး ။
ကုတ်အင်္ကျီအဖြူရောင် ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီအဖြူရောင်လေးနဲ့ လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ ချစ်ရသူကို တွေ့တယ် ဒါပေမဲ့ လှမ်းခေါ်မယ်လုပ်ပေမဲ့ မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး အေဝးကပဲ သူ့ကို ငေးကြည့်ရင်း ကျနော့်အမြင်အာရုံတွေ မွုန်ဝါးလာလို့ အမှတ်တမဲ့ မျက်လုံးကို ပွတ်လိုက်တော့ ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်စီးကြောင်းက တသွင်သွင်နဲ့ ချစ်သူလေးကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝေးသွားတာပေါ့ဗျာ……. လေဆိပ်က အပြန် ကားပါကင်ဘက်ကို ဝင်မိတော့ စိုင်းစိုင်းသီချင်း ” ဖြူ ဖြူစင်စင် ကောင်မလေးကို တကယ်ကြင်ကြင်နာနာ ချစ်ခဲ့လည်း အခုတော့ နာနာကျင်ကျင်နွုတ်ဆက်ရပြီ တာ့တာ ” တဲ့ဗျာ. .လူက ငိုချင်နေပါတယ်ဆိုမှဗျာ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဘယ်သူတောင်းစားများ လက်ကမြင်းကြောထပြီး သီချင်းလာဖွင့်လည်းဆိုပြီး ဘုရွိုး ရွိုးဖို့ လှည့်အကြ ည့် လူကို စပ်ဖြဲဖြဲမျက်နှာပေးနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ လှတပတ ကောင်မလေးကိုတွေ့တော့ ဒေါသတွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးဗျာ…….. ။
နှင်းရေ ကို့ဘဝက နှင်းကို လွမ်းတာတောင် ကောင်းကောင်းမလွမ်းရပါဘူးကွာဆိုပြီး ကားပါကင်ကို ကျော်လွန်၍ ကားဂိတ်မှာ ထိုင်ရင်း bus ကားစောင့်နေမိတော့သည်။ ဘာလိုလိုနဲ့ နှင်း ကျနော့်ကို ခွဲသွားတာ ၆လ လောက်ကြာသွားပြီဗျာ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာတော့ မနေ့တနေ့အတိုင်းပဲ ပြန်တွေးတိုင်း နာကျင်မိတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယနှစ် ရောက်လာပေမဲ့ ကျနော့်စိတ်အစဉ်ကတော့ ပထမနှစ်မှာပဲ ကျန်ခဲ့တယ် ။ကျောင်းမှာ အတန်းအားတိုင်း နှင်းတက်ခဲ့တဲ့ သချာင်္ဆောင်လေးမှာ ထိုင်ရင်း နှင်းအကြောင်း စဉ်းစားနေမိတယ်ဗျာ ။အဲ့လို အသွားကောင်းလို့ ဒုတိယမြောက်နတ်သမီးနဲ့ ထပ်ဆုံမိတယ်ပဲ ဆိုပါဆို့ သယ်ရင်းတို့လည်း သိချင်မှာပေါ့နော် ။အဖြစ်ပျက်က ဒီလိုဗျာ ။ ဒီနေရာမှာ ၂ ပါးသွားလေး ၁ပုဒ်လောက် စဖွင့်လိုက်ရအောင် ခ်ခ်။ စုလဲ့မိုး ကျမက ဒုတိယနှစ်မှ တောင်ကြီးကနေ ရန်ကုန်ကို ကျောင်းပြောင်းလာတာပါ။ဒီရောက်တော့ သင်တန်းတွေ တက်ချင်သေးတော့ ကျောင်းကို အေဝးသင်ပဲ ယူလိုက်တော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယမြောက်ကျောင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျောင်းတက်ဖို့ စဉ်းစားမိတော့ ကျောင်းကလည်း ကို့အတွက် အသစ် ပတ်ဝန်းကျင် နေရာဒေသကလည်း အသစ်ဆိုတော့ အစစအရာရာ ကျမအတွက် အသစ်အဆန်းတွေပါပဲရှင်။
ပြောရင် ကြွားသလိုဖြစ်နေပါ့မယ်ရှင်…..ကျမတို့ သချာင်္မေဂျာမှာ ကျမက စတားပဲလေ။တောင်ကြီးမှာတုန်းက ပြောပါတယ်….ဘယ်ယောကျာ်းကိုမှ ရင်မခုန်တတ်တဲ့ကျမ မှတ်မှတ်ရရ ကျောင်းစတက်ပြီး ၁ ပတ်လောက်အကြာမှာ ကျမရင်ထဲကို ကောင်လေးတယောက်တိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ကျမ သူ့ကို ကြည့်လိုက်တိုင်း ကျမတို့အခန်းကို သူအမြဲကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကြည့်မိတိုင်း အမြဲမျက်ရည်ဝဲနေတတ်တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်း သူငယ်ချင်းတွေဆီက စုံစမ်းကြည့်တော့ အဲ့ကောင်လေး နာမည်က ကိုဇင်တဲ့ ….သူက သူ့ကောင်မလေးကို သိပ်ချစ်တာ အခုသူ့ကောင်မလေးက နိုင်ငံခြားထွက်သွားတော့ သူ့ကောင်မလေး တက်ခဲ့တဲ့ အဆောင်မှာ လာပြီး အလွမ်းဖြေနေတာတဲ့……. အဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပြီး ကျမရင်ထဲ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိဘူးရှင်။ အမြဲညှိးငယ်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကို ပြုံးစေချင်တယ်…မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်းနေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းလေးတွေကို အရင်လို လင်းလက်နေစေချင်တယ်။ဒါနဲ့ပဲ ကျမက စပြီး……… တနေ့ ကျနော် ထိုင်နေကျနေရာလေးမှာ ထိုင်ပြီး နှင်းအခန်းကို ငေးနေတုန်း ကျနော့်ရှေ့မှာ အရိပ်ကလေး တရိပ်လာရပ်နေတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုတော့ နှင်းများ ပြန်လာတာလားဆိုပြီး မျက်နှာ မော့ကြည့်လိုက်တော့ နှင်းမဟုတ်ပါဘူး ကျနော် မသိတဲ့ မိန်းမတယောက်ပဲ ။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဘယ်သူလည်း ဘာကြောင့် ဒီနားလာရပ်တာလည်းဆိုပြီး စဉ်းစားနေတုန်း တစ်ရွုးလေးတရွက် ကမ်းလာတဲ့ လက်ဖြူဖြူလေး တဖက်ကို မြင်ရတယ်။လှလိုက်တဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေဗျာ ဖြူနုပြီး သွယ်လျလိုက်တာများ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ကျနော်ငေးနေတုန်း ” ကောင်လေး မင်းမျက်ဝန်းက မျက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်တဲ့ ” အမိန့်သံလိုလို တောင်းဆိုတဲ့ အသံလိုလိုကြားလိုက်ရတယ် ကျနော်လည်း အလိုလိုပဲ အဲ့တစ်ရွုးလေးကို ယူပြီး မျက်ရည်တွေ သုတ်ရင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဘာပေါ့ညာပေါ့ ခ်ခ် အဲ့လိုနဲ့ တယောက်နဲ့တယောက် နာမည်တွေ ကိုယ်စီပြောပြရင်း ခင်မင်သွားကြတယ်………. ဒီနေ့တော့ ကျမဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနေ့ပဲရှင် ။ကျမချစ်တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ကြတယ်။သူ့အပြုံးတွေ သူ့အကြည့်တွေ နွုတ်ခမ်းလွုပ်ယုံသာ ပြောတတ်တဲ့ စကားသံချိုချိုလေးတွေ အားလုံးကို ကျမ တပ်မက်တယ် ၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်တယ် ။ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကျမဘဝတခုလုံး သူ့အတွက် ပေးဖို့အသင့်ပဲ ။ ကျမတို့ သံယောဇဉ်ကို ပိုပြီးခိုင်မာစေတဲ့ နေ့လေးတနေ့ရောက်လာတယ် အဲ့နေ့လေးမှာ ရာသီဥတုက အရမ်းသာယာတယ် ။
ကျမလည်း ကျောင်းပိတ်ပေမဲ့ ဘာကြောင့်လည်း မသိဘူး သူ့ကို အရမ်းတွေ့ချင်လာတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဆီကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ဖုန်းခွက်ကို လက်က လှမ်းလိုက်ရင်း…….. ညက ညလုံးပေါက် ဂိမ်းဆော့ထားတော့ လူက အိပ်ချင်နေပြီဗျာ ဒါနဲ့ အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်တော့ ဘေးနား ဖုန်းက ထမြည်ပါလေရော ” ဟဲ့ သောက်ပလုတ်တုတ်…မနက်အစောကြီး ဘယ်က ဖုန်းလဲကွ ” ဆိုပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ စုလဲ့မိုးဆီက ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါ ကောက်ကိုင်ပြီး. …. ” ဟဲလို….မိုး…..အစောကြီး ဘာကိစ္စလည်း သယ်ရင်းရာ ” ဆိုတော့ ” ကိုဇင်….နင်အားရင် ငါ့ကို ကန်တော်ကြီးလိုက်ပို့ပါလား….ငါ ရန်ကုန်ရောက်တာ မကြာသေးတော့ မသွားတတ်လို့ပါ ” ဆိုပြီး ခခယယလေးပြောတော့ နဂိုတည်းက အညှာလွယ် အယုံလွယ်တဲ့ ကျနော်က သယ်ရင်းက အကူညီတောင်းတာပဲဆိုပြီး မအိပ်တော့ပဲ အိပ်ယာကနေ အလူးလဲထပြီး ရေမိုးချိုးရတော့တာပေါ့……
ဒီနေ့သူနဲ့အပြင်မှာ ၂ယောက်ထည်း တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ ကျမစိတ်တွေ အရမ်းလွုပ်ရှားမိတယ်ရှင်…. အဲ့နေ့မှာပဲ ကျမတို့ သံယောဇဉ်ကို တဆင့်တိုးခဲ့တယ် ကျမဘက်ကပဲ စရတာပါ ။ဖြစ်ပုံကတော့ ဒီလိုရှင့်……. သူနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ ကန်တော်ကြီး အဝင်ဝနားရောက်လေလေ ကျမ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လေလေပဲ ရှင် ချိန်းထားတဲ့ နေရာမှာ သူရောက်နေတာတွေ့တော့ ကျမ အရမ်းပျော်သွားတယ် သူ့ကိုတွေ့တော့ ” ကိုဇင်….ရောက်နေတာ ကြာပြီလားဟင် ” သူလည်း ” မကြာသေးပါဘူး မိုးရဲ့ စောစောကတင် ရောက်တာ ” အဲ့ဒါနဲ့ သူ့လက်မောင်းကို တွဲပြီး ကန်တော်ကြီးထဲ ဝင်မယ်လုပ်တော့ သူ ကျမကို အံ့အားသင့်သလို အကြည့်နဲ့ ကြည့်တယ်…ကျမလည်း “ဘာကြည့်တာလည်း တို့လှလို့လား” ဆိုတော့ သူပြုံးပြီး တဖက်လှည့်သွားတယ် သူ့ အဲ့ဒီအမူအယာလေးကို ကျမအရမ်းချစ်တာပဲ။
ပြီးတော့ ကျမချစ်တဲ့ လူလက်မောင်းကို တွဲပြီး ကန်တော်ကြီးထဲ လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အရသာကို ကျမ အရမ်းကြိုက်တယ် အရမ်းလည်း တန်ဖိုးထားမိတယ်။ လျှောက်တာ နဲနဲကြာလာတော့ ” ကိုဇင်ရယ် ထိုင်ကြရအောင်ကွာ…တို့ အရမ်းညောင်းလာပြီ” လို့ကျမပြောတော့ သူလည်း ဟိုနေရာက ကောင်းတယ်တဲ့ သူပြတဲ့နေရာကို ကြည့်လိုက်တော့ ရေစပ်နားလေး ဘေးမှာလည်း ပန်းပင်တွေ ဖုံးထားတော့ တကယ့်ခြုံတော အသေးစားလေးလိုပဲ…ဟွန့်သူအရမ်းလည်တယ်ရှင့် အဲ့နေရာကို သူမို့ ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ့တယ်….. သူပြတဲ့နေရာလေးမှာပဲ ကျမတို့ထိုင်ရင်း ” ကိုဇင် တို့ကို သီချင်းဆိုပြပါလားကွာ ကိုဇင့်အသံလေးက အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ် ” လို့ ကျမပြောလိုက်တော့ ရှက်ဝဲဝဲလေးဖြစ်သွားတဲ့ ကောင်လေးကို ကျမအသည်းယားပြီး ဖက်နမ်းမိတော့မလို့ရှင် ခ်ခ်။ သူအသံသြသြလေးနဲ့ သီချင်းဆိုပြနေတုန်း ကျမ သူ့ပခုံးပေါ်မှာ မှီပြီး နားထောင်နေလိုက်တယ် သူဆိုပြတဲ့ သီချင်းလေးက အဲ့တုန်းက ခေတ်စားနေတဲ့ ဉာဏ်လင်းအောင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေးလေ ။သူ့အသံနဲ့ အရမ်းလိုက်တာပဲရှင် ။အဲ့လောက်ထိ အဆိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ကျမ မထင်ထားဘူး…… တကယ်ဆိုးတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးဗျာ ။ကျနော့်ကိုပန်းခြံထဲမှာ အရှက်ကွဲအောင် သီချင်းအတင်းဆိုခိုင်းတော့တာပဲ။ ကျနော် ရှက်လိုက်တာဗျာ ။
ဒါပေမဲ့ သူက ကို့သူငယ်ချင်းပဲလေဆိုပြီး အဲ့ခေတ်က ရေပန်းစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းသီချင်းကို ဆိုပြလိုက်တယ် ဆိုနေတုန်း ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းမှီပြီး နားထောင်နေတာ တကယ့်ကလေးလေးလိုပဲ ။ ဆိုနေတဲ့ သီချင်းလေးလည်းဆုံးရော ကျနော်ကို မော့ကြည့်တဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာ မျှော်လင့်နေတဲ့ အကြည့်လေးတွေ တွေ့တော့ ကျနော်လည်း ဘာဖြစ်သွားလည်း မသိဘူးဗျာ သူ့နွုတ်ခမ်းပါးပါးလေးကို အသာယာပဲ စွဲစုပ်မိသွားတယ် ။ဒါပေမဲ့ သူ့ဘက်က ငြင်းဆန်တာမျိုး မရှိတော့ ကျနော်လည်း လျှာကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး သူ့လျှာလေးကို အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်လာရတာပေါ့ တကယ်မနမ်းတတ်သေးတဲ့ အူရိုင်းလေးလား မသိပါဘူးဗျာ…..ကျနော်ကပဲ အစအဆုံး ဦးဆောင်ပေးရတယ်….. လျှာချင်း ကလိရင်း အခြေနေကောင်းလာတော့ လက်ကို သူ့ရင်သားလေးပေါ် တင်လိုက်တော့ သူတချက် တုန်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ လက်ကို လာမဖယ်ပါဘူး…..ကျနော့်သဘောပဲလို့ အချက်ပေးလိုက်သလိုပဲ. ….ကျနော်လည်း ထိန်းထားသမျှ စိတ်ကို အကုန်လွတ်ပေးလိုက်တယ် နို့ ၂လုံးကို စိတ်ရှိလက်ရှိ အားရပါးရကိုင်တွယ် ဆုပ်နယ်ပြီး လက်က အောက်က စကပ်အောက်ကို သွင်းလိုက်တော့ ပထမဆုံး ထိတွေ့ရတဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေက နူးညံ့လိုက်တာဗျာ ။
အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့ ပေါင်တွင်းသားတွေကို တရွရွပွတ်သပ်ပေးပြီး အလယ်က ဖောင်းမို့မို့တောင်ကုန်းပေါ်လက်က ရောက်သွားတယ်…..သူလည်း စိတ်လာနေပုံရတယ် သူ့ပိပိလေး ဖောင်းကားနေတာများ လက်နဲ့ ခပ်အုပ်အုပ်လေးကိုင်ထားပြီး ခပ်ရွရွလေးဖိလိုက်ရင်ပဲ အရည်တွေတောက်တောက်ကျလာပါလေရော သူ့ပင်တီလေးဆို ရွဲနစ်နေတာပဲ ကျနော်လည်း အချိန်သိပ်မဖြုန်းတော့ပဲ ရတုန်းလေး ကိုင်နိုင်သလောက် ကိုင်မှ ဆိုပြီး ပင်တီအောက်ကို လက်ညှိးသွင်းပြီး မြှောင်းလေးတလျှောက် အထက်အောက်ဆွဲပေးလိုက်တော့ ” မောင်…ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်းကွာ…မ ခံစားရတာ တမျိုးပဲကွာ. …မြန်မြန်လေး ပွတ်ပေးပါ….မ ကောင်းလာပြီ…..အဟင်းဟင်း……ကောင်းတယ် မောင်ရာ ” ဆိုပြီး တောက်လျှောက်ညည်းပါလေရော….. ကျနော်လည်း ဘယ်လောက်ထိပွတ်ပေးလည်း ဆိုရင် သူ့ပိပိလေးမှာ အရည်သာမရှိရင် မီးပါထပွင့် မတတ်ကို လုပ်ပေးမိတယ် ။စေတနာတွေပေါ့ဗျာ ခ်ခ်….. အဲ့လိုလုပ်ပေးနေရင်း သူပြီးသွားတယ်ထင်တယ် သူ့တကိုယ်လုံးတုန်ပြီး ကျနော်ကို တင်းတင်းဖက်ပြီး အရမ်းချစ်တယ် မောင်ရယ် ။ ကျနော့်တို့ ကံကောင်းပုံများ ကိုကရည်းစားစကားပြောစရာ မလိုဘူး ……… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အူရိုငျးလေး